Facebook Chat တွင်ဆက်သွယ်မှုပျက်ကွက်ခြင်း Gadget သတင်း
Facebook Chat ဆက်သွယ်မှုပျက်ကွက်ခြင်း
El ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စကားပြောမယ် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းအလုပ်မလုပ်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုလိုချင်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ Facebook Messenger ရောက်ရှိပြီးကတည်းကပြproblemsနာအားလုံးနီးပါးပျောက်ကွယ်သွားပြီးသုံးစွဲသူများနည်းနည်းလျော့နည်းလာတယ်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်ပြproblemsနာများရှိသောသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ယက်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းထက်မကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စစ်ဆေးသင့်သည် ပြaနာတစ်ခုရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါက Facebook chat ၏ချွတ်ယွင်းမှုပြresနာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Mark Zuckerberg တီထွင်ခဲ့သောလူမှုကွန်ယက်သည်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းများစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ chat သည်လူမှုကွန်ယက်အတွက်အခက်အခဲများအများဆုံးပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာမှန်သည်၊ သို့သော်ထိုပြproblemနာသည်လုံးဝကျော်လွှားနိုင်ပုံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည် Facebook Messenger ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်, သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်တွင် Fascebook chat application အသစ်သည်၎င်းကိုပြabsolutelyနာလုံးဝမဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင်အဆက်အသွယ်များအားလုံးနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုသည်။
ပြchatနာမရှိဘဲ Facebook chat နှင့် Facebook Messenger ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » Facebook Chat ဆက်သွယ်မှုပျက်ကွက်ခြင်း
567 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ANA က ဟုသူကပြောသည်
ငါ <3 အော့ဖ်လိုင်းပေါ်လာရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါ
ana xfa သည်မကြာမီဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပို့ပေးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်
ရက်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကိုအစတွင်မှတ်ချက်မရေးသောအခါကြည့်ချင်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဓာတ်ပုံကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ အောက်ခြေတွင်ကျွန်ုပ်သည် Facebook chat တွင်ဤအချိန်လေးတွင်မဆက်သွယ်နိုင်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုရရှိသည်။ ။ ငါအရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်နေ
မင်္ဂလာပါ၊ ကားလို့စ်လိုပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲ၊ ကျွန်တော်ဟာတခြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုမမြင်နိုင်တာ၊ ဘာမှမရေးနိုင်၊ မပြုပြင်နိုင်တာအမှန်ပါပဲ။
ငါကအပူတပြင်းပါပဲ၊ ငါစကားမပြောနိုင်ဘူး၊ ငါလုပ်ရင်ငါမျက်နှာကိုပစ်လိုက်ပြီ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
အဲလစ်ဇဘက် reyes ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကသူငယ်ချင်းများစွာသည် Facebook ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်၊ log in ၀ င်သောအခါ၊ ပင်မစာမျက်နှာသည်တိုးတက်မှုမရှိဘဲထွက်လာသည်၊ မိနစ်အနည်းငယ်မျှဝင်ပေါက်၊ နံရံတစ်ခုအနေနှင့်တစ်ခုခုကိုညွှန်ပြသည့်အခါ၊ မေးလ်ကနေဆောင်းပါးတွေစသည်ဖြင့်။ တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီသို့သတင်းပို့ပါ။ သူတို့ငါနှင့်အတူအများအပြားစမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာမှ !!! ၎င်းသည်လိုင်းမဟုတ်ပါ၊ Facebook ပြproblemsနာများဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့်အရာတစ်ခုခုရှိပါသလား ????
Elizabeth Reyes အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါ့ကိုလည်းပြproblemsနာတွေအများကြီးပေးတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါဟာကျွန်တော့်ပြတင်းပေါက်တွေကြောင့်လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်တော့သူကကျွန်ုပ်မည်သည့် ၀ င်းဒိုး Facebook ကိုဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ အမြဲတမ်းငါကိုပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်။ ချက်ခြင်း ၀ င်းဒိုးပိတ်ပြီး၊ အခြားအချိန်များကကျွန်ုပ်ကို ၀ င်ခွင့်မပြုပါ။ သူတို့အမှားဆိုရင်တော့မကြာခင်ပြန်ပြင်ပေးပါ။ ငါသည်းခံခြင်းရှိ၏။
ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားသည်၊ ကျွန်ုပ် Facebook သည်အထူးသဖြင့်စာမျက်နှာပါသည့်ဂိမ်းများအတွက်အသုံးပြုသော Script အချို့မှဆင်းသက်လာနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါ့သမီးကအဲဒီမှာပေးထားတဲ့ဂိမ်းကိုစဖွင့်လိုက်တဲ့နောက်မှာပြtheနာတွေဖြစ်လို့ငါထင်တာပဲဒါကငါထင်တာကငါချက်တင်ချက်ကငါပေးလိုက်တဲ့အဖြေကိုဘယ်တော့မှမပို့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီစာမျက်နှာကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ Explorer 8.0 ဖြစ်သောဘရောက်ဇာစာမျက်နှာကို "Refresh" ပေးသည်အထိဘယ်တော့မှတင်မပြီးပါစေနှင့်။ Internet Explorer version7သို့ပြန်သွားသင့်သလား။
ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါချက်ချင်း Facebook ထဲဝင်တဲ့အခါငါအမှားတစ်ခုရပြီးအရာရာတိုင်းရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲ။ လူတိုင်းကရွံစရာကောင်းတဲ့ငါမှလွဲရင် Facebook မှာ chat လို့ရတယ်။
မာရီယာ beatriz ဆေးလ်ဗား ဟုသူကပြောသည်
ငါ facebook chat ဝင်ရန်ကြိုးစားသောအခါငါရိုက်ထည့်ရန်နှိပ်ပါ။ weco ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါနှင့် facebook chat သည်မဖွင့်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။
Maria Beatriz Silva သို့ပြန်သွားပါ
အိန်ဂျယ် Eliu ဖာနန်ဒက်ဇ Vidal ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါနှင့်ထပ်တူဖြစ်သည်၊ ငါသည်လည်းငါ၏ပြတင်းပေါက်ဖြစ်သည်ဟုငါထင်၏
ငါက format မတိုင်မီ Facebook ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်
၀ င်းဒိုးဖုန်းခေါ်တဲ့ပရိုဂရမ်တခုခုပျောက်နေလို့လားမသိဘူး၊ အဲဒါကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ pc ကိုငါချပ်ချပ်ပြီးကတည်းကကျန်စာမျက်နှာအားလုံးကအရမ်းမြန်တယ်။
ကျွန်ုပ် Facebook ထဲသို့ ၀ င် ရောက်၍ ၅ စက္ကန့်မျှမကြာပါ။ အဆက်အသွယ်များစာရင်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးမည်သည့်ဓာတ်ပုံ၊
ငါထင်တယ်ပြtheနာက facebook စင်တာ၌တည်ရှိ၏ ..
Angel Eliu Fernandez Vidal အားစာပြန်ပါ
ငါ ၂ ရက်လုံးလုံး Facebook ကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ပြီးတော့စာမျက်နှာကစတင်ဖွင့်လာတယ်၊ တင်ပြီးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်စာမျက်နှာကမဖွင့်ဘူး
carlos p မှစာပြန်ရန်
အရင်ကလူတွေလိုငါ Facebook စာမျက်နှာကိုကြည့်လို့မရဘူး၊ စာမျက်နှာပေါ်ကအမှားတစ်ခုကိုငါ့ကိုပြတယ်၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ ငါဒီလို ၅ ရက်ကြာပြီးပြီ၊ ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးပါ
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဝင်ရပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
ငါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထည့်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုထည့်ချင်တဲ့အချိန်မှာငါအမှားတစ်ခုရလာပြီးဘယ်တော့မှ load မပြီးသေးဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်အမှားမရသော်လည်းမည်သည့်အခါမျှဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ပါ
အစပိုင်းမှာတော့ငါဟာတစ်ချိန်ကကတည်းက PC ပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ အရင် Window မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ကွန်ပျူတာဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပေးတဲ့ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ U ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသွားပြီးထပ်တူအမှားမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်။
Bye, Daniela ။
ဟဲလိုကျေးဇူးပြုပြီးဒီပြproblemsနာတွေကိုအဖြေပေးတဲ့သူရှိလား။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်သာ Facebook အသုံးပြုခြင်းပြသနာများရှိသည်၊ အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာများမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ငါနားမလည်ကြဘူး !! တစ်စုံတစ် ဦး ကတစ်ခုခုပြောရန်အဆင်ပြေမည်။ အနည်းဆုံး ၄ င်းကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲ၌များစွာသောသူတို့သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အတူလှပစွာငွေတောင်းခံ။ ကျေးဇူးတင်ကြပြီးအဖြေပေးကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ, သူကအခြားရွေးချယ်စရာ client ကိုမသုံးနိုငျသညျ
Hello, တူညီတဲ့နေ့ရက်များစွာအတွက်ငါ့ကိုဖြစ်ပျက်, ထိုသူသည်ငါ့ကိုတူညီသောပုံရသည်, ဒါက Fixed ဘာမှမရှိဘူး, ဒီနေရာမှာငါဒီနေရာမှာသတင်းပို့ဘယ်မှာရှိသေး၏။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်မှာငါ CHAT နှင့်အိုင်တီကို fix ဖို့ဘာမျှမ, ငါသည်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မကြာခင်ပြန်ဆုံကြမယ်။
maria trianon ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဖွင့်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှဖွင့ ်၍ မရပါ၊ မည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ယောက်တည်းပိတ်လိုက်သည်။ အလွန်ကောင်းသည် Laguin သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီ။ NOOOO ကိုဖြေဆို ?????
maria trianon အားပြန်ပြောပါ
Arelys မက်ဒီနာ ဟုသူကပြောသည်
Arelys Medina သို့ပြန်သွားပါ
ငါရက်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုမ ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါ၊ ပင်မစာမျက်နှာကဖွင့်သော်လည်း၎င်းသည်အမှားများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးကျွန်ုပ်၏အိုင်ဒီနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုထည့်ပြီး၎င်းသည်ဆက်မစတင်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလား? ငါ artite အနည်းငယ်ပြီးသား !!!!
မနေ့ကမေ ၂၄ ငါဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ကောင်းကောင်းဆက်သွယ်ခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့သုံးနာရီကြိုးစားပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး
ငါသုံးရက်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ဒီနေ့တစ်နာရီလောက်ဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ ပြီးတော့ငါဘာမှမဆက်သွယ်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် fb နှင့်ပြaနာရှိနေပါတယ် ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဒီနှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ထားသည့်ပင်မစာမျက်နှာသည်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာဖွင့်ပေးသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုထည့်သွင်း။ ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမှကုန်ဆုံးသွားခြင်းမရှိတော့သဖြင့်ကျွန်ုပ် ဝင်ရောက်၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ၊ ဆာဗာသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်ပြaနာရှိမရှိသိချင်ပါသည်
တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ နှစ်စက္ကန့်လောက်အကြာမှာပဲ၊ အဲဒီစာမျက်နှာပဲတင်တယ်၊ ငါ့ရဲ့ Username ကိုတောင်ထည့်ဖို့တောင်အချိန်မရှိသေးဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုကူးစက်ပြီးသားဗိုင်းရပ်စ်မရှိတော့ဘူး။
ငါ Facebook အကောင့်ဖွင့်သည့်အချိန်တွင် chat bar နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောအဆက်အသွယ်များတွေ့လျှင်ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ သို့သော်ငါ ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါစကားစုပေါ်လာသည်။ တင်နေသည်။ ထိုအရပ်ကလာသည်မဟုတ်။ မည်သူမဆိုအကြောင်းပြချက်သိသလား
ငါလော့အင်လုပ်ချင်ရင်၊ ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်မပြုပါ၊ သမိုင်းကိုသွားပါ၊ ပြီးခဲ့သောရက်များမှစာမျက်နှာကိုမဖျက်ပါကကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုရေးစရာမလိုဘဲထပ်မံဆက်သွယ်ပါမည်။ ယခု - အခြားဆုံးရှုံးမှုများအကြောင်း။ သင်၏စာမျက်နှာ၏ပေါ်လစီနှင့်အခြေအနေများကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဗားရှင်းကိုပြောင်းပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ချိတ်ဆက်ပုံပေါ်သည်၊ သို့သော်သူတို့ကိုငါမဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ သူတို့ကိုနှိပ်လိုက်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိကြောင်းအလိုအလျောက်ပြသသည်။ မည်သူသည်အဖြေပေးနိုင်သနည်း ???
ငါပြtheနာကြီးမားကြောင်းသိမြင် !!!! လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကဲ့သို့ပင်မင်းကဲ့သို့များသောအားဖြင့်မျက်နှာဖုံးသည်လုံးဝမတင်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမျှမမြင်နိုင်ပါ။ စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပြီးနာရီနှင့်ချီပြီးဆက်နေသည်။ ဒါကြောင့်ပိတ်သည်အထိ။
ငါမသိတာတွေ၊ ငါအများကြီးလုပ်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဖြေပေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီထင်တယ်မဟုတ်လား။
Cordoba-Argentina မှ Lore ။
facebook mallll လမ်းလျှောက် !!! အဓိကစာမျက်နှာကိုဖွင့်မထားဘူး၊ မမြင်နိုင်ဘူး၊ ဘာမှမ ၀ င်ဘူး၊ သိပ်မကုန်တိုက်တော့ဘူး၊ စိတ်ဖိစီးနေတယ်၊ ​​မတိုးတက်ဘူးဆိုရင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပုံရိပ်ဟာတကယ်ကိုဆိုးရွားလာလိမ့်မယ်၊ ကံကောင်းတာက၊ အဲဒါကိုပြင်ပါ !!!
ကောင်းပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရူးကိုဖြစ်စေသောဤအဖြေကိုရှာပါကကျွန်ုပ်တို့၌တစ်ခုတည်းသောကောင်းသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်
၎င်းသည်ကန ဦး စာမျက်နှာကိုမဖွင့်ရန်၊ ချက်တင်နှင့်သတင်းများနှင့်မချိတ်ဆက်ကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
mmm ကျွန်ုပ်သည်စကားဝိုင်းထဲဝင်ရန်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ x ejm ... စာမျက်နှာကိုပင်မျက်နှာတစ်ခုတည်း၌ပြောင်းလဲပစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားပြီးကျွန်ုပ်ထပ်မံချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ ... အခြားနေရာများတွင်ငါမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ သတိပေးချက်ခလုတ်ဘေးတွင်သင်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုသောဘားတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်မရ။
တစ်ယောက်ယောက်က poodle (သို့) ပြင်သစ်ဘူဒိုဇာ ၄၇၃၀-၇၀၇၂ ကိုလိုချင်တယ်
ALFONSO GOMEZ MARTINEZ ဟုသူကပြောသည်
စကားဝှက်ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါအိုင်တီကမှားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်၊ Facebook မှာစာကိုပို့ပေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါ့ကိုအဖြေမပေးခဲ့ဘူး၊ ငါစာမဝင်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်လည်သက်ဝင်နိုင်မည်နည်း။
ALFONSO GOMEZ MARTINEZ အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဖလောရင့်စ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်နှင့်လည်းအတူတူပါပဲ ငါ id နှင့် password ကိုထည့်ပြီး session ကိုစတင်ရန်ပေးသည်။ ဘာမှဖြစ်မလာပါ။ ၎င်းသည် load လုပ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီးဘာမှမလုပ်ပါ။ တကယ်တော့ fb သည်သူတို့၏စီးပွားရေးပျောက်ကွယ်သွားလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကျော်ကြားမှုဆုံးရှုံးသွားနေကြသည်
ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်၏ fb သည်မဝင်ရပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်သည်စာမျက်နှာပေါ်တွင် Herro ကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ငါ Facebook ကို ၀ င်ချင်ရင် ၀ င်းဒိုးကချက်ချင်းပိတ်ပြီးကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ထူးဆန်းတာက BlackBerry ကိုဝင်တဲ့အခါသူကပြproblemနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်တယ်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ဒီမှာအသစ်ပါ ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စကားဝိုင်းနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။ အတော်လေးထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကငါ့အတွက်ရက်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကို pc (mozilla, internet, etc) ရှိမည်သည့် browser မှမဆိုကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်သောအခါသူငယ်ချင်းတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အဆက်ပြတ်နေပြီး ipod touch ရှိ facebook app မှတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်မိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပြီးတော့ငါစာတွေမပို့နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ် -“ ဒီအကြောင်းကိုဒီအချိန်မပို့နိုင်ဘူး၊ နောက်မှထပ်ကြိုးစားပါ” လို့ပြောတယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိအောင်ကူညီပေးပါ
ကျွန်ုပ်မျက်နှာ၌ပြproblemsနာများရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာပရိုဖိုင်းကိုကြည့်ပြီးဘာမှပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာမျက်နှာအမှားတစ်ခုကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ပြproblemနာတစ်ခုမှာများစွာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ pc နှင့်သတ္တုတွင်းမှသာမျက်နှာကိုမဆက်သွယ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်အချို့ကိုမှားယွင်းစွာဖျက်မိလို့ Facebook မှာဘာမှမတွေ့မြင်နိုင်၊ မရေးမိအောင်လည်းဖျက်လိုက်သည်။
ငါ "Adobe" အားလုံးကို download လုပ်ပြီးသွားပြီ = =
Tamara ^ ။ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
Jose Alberto ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမဆို၏ဓါတ်ပုံများကိုမြင်ခွင့်မပြု၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ် chat နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းလုံးဝမရှိပါ။ ငါအဖြေတစ်ခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
jose alberto အားပြန်ပြောပါ
ဖလောရင့်သည်ပင်မစာမျက်နှာကိုတစ်ပတ်ကြာတင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက် yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!
yoana ပါ ဟုသူကပြောသည်
Facebook chat ကဘယ်တုန်းကမှငါ့ကိုမဖွင့်ခဲ့ဘူး။ ဝင်းဒိုးတစ်ခုအလွတ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြတ်တောက်သွားတာကိုဖြေရှင်းဖို့ပြfacebookနာကိုသိဖို့လိုတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီဟာကိုသူတို့မဖတ်ကြဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ PC တွင်ကျွန်ုပ်၏ session သည် chat application သည်ကြာရှည်မခံပါ။
အခြား PC မှာကျွန်တော့်ရဲ့ session ကပြproblemနာမရှိဘူး
ကျွန်ုပ်၏ PC ရှိနောက်ထပ် session တစ်ခုသည်ပြaနာတစ်ခုကိုလည်းမှတ်မထားပါ
Ximena Ayala ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး။ သူကကျွန်တော့်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျတွေပြန်ပို့တာ၊ စကားပြောတာ၊ ဓာတ်ပုံပြောင်းတာ၊ မှတ်ချက်တွေမပေးဘူး၊ လူများကိုမထည့်ရ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
Ximena Ayala သို့ပြန်သွားပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ ရက်ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ် chat ကိုကျွန်တော်မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ သူသေသွားပြီ။
Natalia acuña ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါ Facebook ကိုတစ်ပတ်လောက်မ ၀ င်နိုင်တော့တာ၊ ပင်မစာမျက်နှာကိုတောင်မှမဖွင့်ဘူး။ ငါလိုလူတွေရှိတဲ့အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုကသူတို့လိုပဲငါနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဆာဗာပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါကမကြာမီဖြေရှင်းနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာလွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည် Facebook ကိုပိတ်ခဲ့ပြီး Facebook chat တွင်မချိတ်ဆက်ခဲ့ပါ။ ယခုဖြစ်ပျက်သောအရာမှာကျွန်ုပ်သည် Facebook ထဲသို့ ၀ င်သောအခါသင်ဆက်သွယ်ထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်လိုသောအခါ၊ ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ် .. ချက်တင်မဝင်ချင်ဘူး
ငါပင်မစာမျက်နှာ load သို့မဟုတ်ချက်တင်ချိတ်ဆက်ကြဘူး
Hugo ငါဘာလဲဆိုတာမသိဘူး။ ၂ ပတ်လောက်ကြာပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ခုခုသိရင်ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ps ငါရိုက်ချင်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာအမှားကိုသာ ပြော၍ မ ၀ င်ပါ
achhhhhhhhh တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုအဖြေတစ်ခုပေး
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏စကားဝိုင်းအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အာရုံစိုက်မှုကိုမမြင်ရ၊ ချက်တင်စကားပြောရုံမျှသာဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်သည်။ ခဏမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာစကားပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည် feecbook ထဲတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုမတွေ့ရပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
feecbook chat တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများကိုသူတို့ဖြေရှင်းရန်သွားသောအခါကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ချက်ချင်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်ချက်တင် ၀ င်းဒိုးမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာကိုဖွင့ ်၍ မှတ်ချက်ပေးသည့်အခါကြည့်ရှုခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး၊ သူတို့ကငါပြောတယ်ငါစာမျက်နှာမဖွင့်ဘူး၊ အမြဲဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲငါ့ကိုစွန့်ပစ်ထားတယ်၊ ငါကအသစ်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​ငါအဖြေတစ်ခုလိုတယ်၊
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာအမှားအယွင်းတွေရှိတယ်၊ ဘုရားသခင် nunk ဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတာအမှားတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ ??
ငါ facebook ဆက်သွယ်မှုမှာပြproblemsနာများအတွက်ငြီးငွေ့ဖြစ်၏, ငါရက်ပေါင်းများစွာပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုပြုပြင်ပြီးပြtheနာမဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့လက်ပ်တော့ပ်မှာငါ့ဇနီးကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်တယ်။ ထိုအခါငါအခြားအီးမေးလ်နှင့်အတူအခြားအဘို့, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ... ငါသီအိုရီငါဖန်တီးသောအကောင့်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသောအခါ, ငါ့ဇနီး၏အကောင့်ကိုငါ့အဘို့အမြဲဖွင့်လှစ်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ငါ့အကောင့်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအဲဒါမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်။ ထို့နောက် desktop ကွန်ပျူတာဖြင့် Facebook ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဖွင့ ်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏လက်တော့ကွန်ပျူတာမှရယူရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကို၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစကားဝှက်နှင့်အရာအားလုံးဖြင့်ထည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့စာရင်းကိုဆက်ဖွင့်ပါ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်းသာ Facebook သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုအသုံးပြုသည်ဆိုသော် Laptop မှသီးသန့်ထူးခြားမှုအချို့ရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲပျောက်သွားသည်။ ငါ Windows Vista ကိုသုံးတယ်၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုရှိမလားမသိဘူး။ မင်းရဲ့အကူအညီကိုကြိုတင်ပေး
Juan အိုမာ Lopes ဟုသူကပြောသည်
juan omar lopes အားပြန်ကြားပါ
လူတိုင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သို့သော်သင်၏ ၀ င်းဒိုးများမှာပြnotနာမဟုတ်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာသည်သုံးစွဲသူများကိုမဟုတ်ဘဲစာမျက်နှာ၏ application များကိုအမြဲတမ်းမွမ်းမံနေသည် (ဥပမာ - စာမျက်နှာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများကိုနားလည်သည်။ ဥပမာ - chat၊ on on) နံရံ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ စသည်ဖြင့်ပြ,နာများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မပူပါနှင့်။ အချို့သည် ၁ ရက်နှင့် ၁ လပင်ကြာလိမ့်မည်၊ သို့သော်အဆုံးတွင်သူတို့သည်အမှားများဖြစ်သည်၊ အခြား browser တစ်ခုနှင့်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ (firefox 1 or IE 1 or 3.5.2 သည်အရေးမကြီးပါ၊ အထူးသဖြင့်လူသိများသောအော်ပရာသို့မဟုတ်အခြားသူအတွက်ပါ) ... ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်သည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် ...
မင်္ဂလာပါ၊ မိုက်မဲတတ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ကွန်ပျူတာထုထည်ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာမှအကောင့်တစ်ခုခုသို့ faceebok နှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။
ငါကလုံးဝအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအခြားကွန်ပျူတာများကနေလုပ်ပါ။ ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုသိတာလဲ။
အကယ်၍ သူတို့သည် Fb သို့အင်တာနက် explorer ကို သုံး၍ ပြhaveနာများရှိပါက firefox ကိုအသုံးပြုပါကကောင်းမွန်စွာဝင်ရောက်ပါကသူတို့ FB ထဲသို့ဝင်ရန် firefox ကို သုံး၍ ပြproblemsနာများရှိပါက IE ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့် fB မှာချက်တင်စကားပြောရတာလဲဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ပြhadနာဖြစ်ရတာလဲ၊ browser ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြproblemနာကအဖြေထွက်လာတယ်။
Jose Peña ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ PC တွင်အိမ်၌ဖေ့စ်ဘုတ်မရှိပါ။ ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်မသိဘူး ငါအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ကတည်းကငါ Facebook ကိုမြင်ခွင့်ပြုလျှင်ငါသာတက်ကြွသောအကောင့်များသာ။ ဒါပေမယ့်အကောင့်အဟောင်းကကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်မှုကန့်သတ်ချက်ကိုမသွားပေးပါဘူး jospec1958@msn.com ကျေးဇူးတင်ပါသည်,
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်လို့ရပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာပြီ။ အဲဒါ မှလွဲ၍ စာမျက်နှာအားလုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုနှစ်ရက်ဝင်လို့မရဘူး။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့အင်တာနက်ရှာဖွေသူကဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
ရက်ပေါင်းများစွာ facebook စာမျက်နှာတွင်အောက်ပါပြproblemsနာများရှိသည်။ အောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်သောအခါ၊ start မှပရိုဖိုင်းသို့သွားခြင်းသည်မလုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံမှုပြုလုပ်ရပါမည်၊ ၎င်းသည်အသက်ဝင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောအရာများအားလုံးမဖြစ်နိူင်ပါ။ ဓါတ်ပုံများကိုမမြင်နိုင်ပါ၊ စာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ချက်များရေးသားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤပြproblemနာကိုသင်အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂလော်ဒီယာ commisso ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်မှာမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ပေါ်လာတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေတော့မသိဘူး။ ပြproblemနာကဘာလဲဆိုတာမသိဘူး။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းချင်တယ်၊ ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖြေနိုင်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
claudia commisso အားပြန်ပြောပါ
to me = ငါရတယ်၊ ချက်တင်စကားပြောလို့မရဘူး
ငါသည်လည်းထိုနည်းတူစွာပြောခဲ့သည် (ယခုအချိန်တွင် Facebook Chat နှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ )
poof! ကောင်းမြတ်ခြင်း! ငါထင်တာပဲ၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကငါနဲ့ချိတ်ဆက်ပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကို "disconnect" တစ်ခုခုပြောဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ အနည်းဆုံးတစ်လလောက်အမြဲတမ်းလိုလို ... ငါကနှစ်သိမ့်မှုမဟုတ်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ ငါအေးဆေးနေ
Facebook chat နှင့်လည်းအလားတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ pk facebook မှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှကျွန်ုပ်အားဖြေရှင်းမှုမပေးနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် chat မပါဘဲငါ့ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသောတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာ chit chat ဟုခေါ်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကူးယူပြီးကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်၊ စကားဝှက်နှင့် voila ထဲသို့ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သူငယ်ချင်းများနှင့်ချက်ချင်းစကားပြောနိုင်သည်။
jose isaac ကိုစာပြန်ပါ
AIYU ပါ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ…အားလုံးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုတောင်မဖွင့်ဘူး၊ စာမျက်နှာကိုစဖွင့်လို့မရဘူး၊ အမှားစတာတွေရှိတယ်။ ငါ့မှာနှစ်ကြိမ်တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ဖွင့်မရတဲ့တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာပဲ။
ငါ Facebook ကိုပထမဆုံးဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်မိနစ်အကြာမှာ chat room ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ငါ message တစ်ခုပို့တဲ့အခါဘာတွေပို့မလဲ၊ ဘာပို့မလဲဆိုတာကိုဒီဇိုင်းဆွဲတယ်၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ပြီး၎င်းတို့အား၎င်းတို့“ အဆက်ဖြတ်ခြင်း” ကိုအနည်းဆုံး ၄ လကြာပြောပြရန်ကြိုးစားသောအခါ ၄ င်းအပြင်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များကကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်တွင်ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ငါ E4 ရှိရင် E7 ကိုသွားတယ်။ ငါ 8 ကို uninstall လုပ်ပြီး 8 ကိုပြန် install လိုက်တယ်။ ငါမှာ windows XP ရှိတယ်။ ငါရဲ့နံရံပေါ်ကအင်္ဂလိပ်စကားမှာ "ယခု frends" ဖြစ်နေပြီလို့ပြောရမယ်။ ယခုသူတို့သည်သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်မည်သူမဆိုသိကြသလော ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်စကားဝိုင်းပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ဒါကငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာလား? FACEBOOK အိုင်တီပြင်ရန် !!!
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ကာ၎င်းတို့ကို၎င်းတို့“ အဆက်ဖြတ်ခြင်း” ကိုအနည်းဆုံး ၄ လကြာပြောပြရန်ကြိုးစားသည့်အခါကျွန်ုပ်အဆက်အသွယ်များကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုမရှိကြောင်းပြောကြသည်။ ငါ E4 ရှိရင် E7 ကိုသွားတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ 8 ကို uninstall လုပ်ပြီး 8. reinstall လုပ်လိုက်တယ်။ ငါမှာ Windows XP ရှိတယ်။ ငါ့ရဲ့နံရံပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စကားမှာ "ယခု frends" ဖြစ်နေပြီဆိုရင် သူတို့သူငယ်ချင်းများဟုပြောရန်မည်သူမဆိုအဘယ်ကြောင့်သိသနည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည် chat ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ဒါကငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာလား? FACEBOOK အိုင်တီပြင်ရန် !!!
Lisette Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်တာကတော့ facebook ဟာ web ပေါ်မှာသုံးတဲ့လူတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့ tool တစ်ခုပါ။ chat ဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့်အမှားမဖြစ်စေဘဲထိရောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့မျက်နှာဟောင်းကိုပြန်သွားတာကကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ ချက်တင်အပလီကေးရှင်းတွင်သူတို့ပြသထားသောပြproblemsနာအချို့။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သို့သော်လူအများကဤအကြောင်းကိုတိုင်ကြားချက်များအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆိုက်ဘာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်သာသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုများသောအခြားသူများအားလုံးသည် chat နှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
(VANINA ငါကမင်းရဲ့ PC ပဲလို့မထင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ဆိုက်ဘာမှာငါကသူတို့ကိုအားလုံးအတူတူပဲ။ ဒါကငါ့ကိုပဲထိခိုက်စေတယ်။ ! Greetings !!)
Lisette Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်တော့ဘူး ... စနစ်ပျက်သွားလို့မရဘူးတစ်ခုခုလုပ်ပါ ... ကျေးဇူးပြုပြီး Facebook chat ကဘယ်အချိန်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Facebook chat စကားပြောနိုင်မှာလဲ။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတာလဲ ... ငါမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပုံမရဘူး။ ။
giovanny pedraza ဟုသူကပြောသည်
giovanny pedraza အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်သည်အဆင်ပြေသော်လည်း Facebook စာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်ဖွင့ ်၍ မရပါ။
၂ ရက်ကြာကျွန်ုပ်မျက်နှာမပြနိုင်ခဲ့ပါ။ အမှားအယွင်းကြီးကြီးမားမားရရှိသောသုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုဖွင့်သောအခါ ... helpaaaaa၊ caht သည်ကျွန်ုပ်ကိုမစိတ်ဝင်စားပါ။ ကျွန်ုပ်ကြော်ငြာသောစာမျက်နှာကိုသာစိတ်ဝင်စားပြီးကျွန်ုပ်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ !!!!!!!
ဘာဖြစ်တာလဲ????? ငါလည်းဖေ့စ်ဘုတ်ကိုသွားလို့မရဘူး !! တစ်ခုခုလုပ်လို့ရမလား ဖြေရှင်းသောအခါမည်သူမဆိုသိတယ် ??????? por favor !!! rtas !!!!
ကျွန်တော့်ရည်းစားကသူမရဲ့ username ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ chat message history မှာ MY user နဲ့ငါစကားပြောတယ်။
loko ... အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာစကားပြောချင်တယ် ... တစ်ခုခုလုပ်ပါ ... ကျေးဇူးပြုပြီး ... လိုက်လုပ်ပါ။ ... ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ ... လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်ကကျွန်ုပ်စကားပြောခြင်းမရှိဘဲ ... စာရွက်စာတမ်းတက်မြန် !!!!
luis idle ql, အခြားလာအိုသို့ weiar သို့သွားပါ
မနေ့ကစနေနေ့ ၉/၁၉/၀၉ ကတည်းကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမဖွင့်ချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ချက်တင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမဆက်သွယ်ပါ ... လွန်ခဲ့သောအချိန်ကအသိပေးချက်များရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်နေ့ရက်များကိုဖော်ပြသည်။ လက်ရှိအချက်များမဟုတ်ပါ။ ယခုချက်တင်စကားပြောခြင်း၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိပါ , နှင့်ငါ update လုပ်သည့်အခါသူကငါ့ကိုဆက်သွယ်ပေမယ့်ငါ့ကိုစာသားများမပို့ပါဘူး ...
ကျေးဇူးပြု၍ ဘာလုပ်လို့ရလဲ ??
ဒီတစ်ခါလည်းသူကရိုးရှင်းပြီးပင်ရီစရာအသံပါလိမ့်မယ် .. ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့ .. .. SHOKWABE, JAVA ကိုထည့်ပါ။ နှင့်အဓိက: သင်က Facebook ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကပြသတစ်ခုတည်းသောအမည်များကိုပြသထားတယ်ချိတ်ဆက်မိတ်ဆွေများကပြသလျှင် .. မိုက်မဲ။ ဒါပေမဲ့ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီပြီးပြီ ... အကယ်၍ ဒီမေးခွန်းလေးမေးကြည့်ပါအဖြေရှာကြည့်ပါ \_ t သတိပြုပါ၊ သတိပြုပါ
igor fritz ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း!! ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုသူလိုချင်သည့်အချိန်တွင်တင်ပြီး ၂ ပတ်ကြာသည်အထိကျွန်ုပ်သည်အခြားစာမျက်နှာများကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်သည့်နေ့ရက်များရှိသည်။ ဗွီဒီယိုများနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုတင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်သည်းခံခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူရန်လိုသည်၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့ပြိုင်ဆိုင်မှု၏အခြားစာမျက်နှာများအားဖြင့်ဖျက်ဆီးနေကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်စိတ်ပူမိတာကဒီစကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အရာကဒီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှမှရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ သူတို့ကဒီပရိုဖိုင်းတန်ချိန်များစွာကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့လို့လား။
igor fritz အားပြန်ပြောပါ
Mauricio Palacioas ဟုသူကပြောသည်
ငါစကားပြောတာကိုတစ်လလောက်ဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီထက်နည်းတယ်၊ ပို့တာကိုသာပေးပို့တာပါ။ ………။ ai de qeda ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက်အချိန်နှင့်အမျှဆက်သွယ်မှုလုပ်ချင်တဲ့အရိပ်အမြွက်မဟုတ်ပါဘူး။ မျှော်လင့်ချက်ကဒီဟာကိုပြင်နိုင်လိမ့်မယ်၊ အဲဒါဟာအလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးလိုအပ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါ့ကိုပြန်ပြုပြင်ပေးဖို့ငါမျှော်လင့်တယ်
Mauricio Palacioas ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မဆက်သွယ်နိုင်သောချက်တင်စကားတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိနေသည်ကိုရှာပါ
အမှန်တရားကတော့ငါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလုပ်တာ .. စာတစ်စောင်ရေးတဲ့အခါငါပို့လိုက်တာနဲ့ပို့ဖို့အချိန်ယူရလိမ့်မယ် .. ဒါဟာသုံးစွဲသူများစွာသောကြောင့်ပြtheနာကိုအဖြေရှာမပေးနိုင်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီအဆင်မပြေမှုကိုမကြာမီဖြေရှင်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း။ Antofagasta ချီလီမှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်
ကျွန်ုပ်မျက်နှာ၌၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲချက်တင်တွင်ပေါ်လာသည်၊ ၎င်းသည်အဆက်ပြတ်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်သတိမထားမိသည့်အချက်များလည်းရှိသည်။ သတိပြုရန်အချက်များရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်ထူးဆန်းသည်မှာအခြားအကောင့်များဖွင့်လျှင်၎င်း၊ အခြားသူတွေအလုပ်လုပ်ကြတာကငါ့မျက်နှာပြproblemနာပဲလား။ ကျေးဇူးပြု၍ လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်းများစွာကမှ ကျေးဇူးပြု၍ ဤနည်းအားဖြင့်သူဘာဖြစ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ၎င်းသည်ယာယီဖြစ်သည်ဟု🙁ထင်ခဲ့သည်
အကယ်၍ သူတို့သည်စာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်ရန်၎င်းကိုတင်ပါက၎င်းသည်ခဏသာပြုပြင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးကောက်ရိုးကကျွန်ုပ်အားနောက်ဆုံးအနေဖြင့် disable လုပ်ရန်နှင့်လူများကဲ့သို့ပြုပြင်ရန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။
Kamilita လည်းအတူတူပဲ။ ရက်ပေါင်းများစွာအတွက်ကျွန်ုပ်၏ချက်တင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုမကျန်ဘဲအဆက်ပြတ်နေပုံရသည်။ ဟုတ်တယ်၊ အခြားအကောင့်တွေကငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ၊ ငါ့ဟာအခြားကွန်ပျူတာတွေကနေအလုပ်လုပ်တယ်။ ဖြေရှင်းချက်နှင့် Facebook ၏လူကြီးလူကောင်း !!!
ရက်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏ချက်တင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုမကျန်ဘဲအဆက်ပြတ်နေပုံရသည်။ ဟုတ်တယ်၊ တခြားအကောင့်တွေကငါ့ pc ကအလုပ်လုပ်တယ်။ kamilita နှင့် fres_a တို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ
ဟယ်လို။ ၃ ရက်အကြာမှာငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပိတ်လိုက်တယ်။ ငါ pc ကပြproblemနာတစ်ခုလို့ထင်ပြီးအခုတော့အဲဒါဟာငါ့အတွက်သာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။ ငါဂျာဗားနှင့်အတူကြိုးစားခဲ့နှင့်ဘာမျှမ။ မင်္ဂလာပါ။
adriana hernandez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တစ်လကျော်စကားဝိုင်းမပြောနိုင်ပါ၊ သင်ပူးပေါင်းချင်ပါတယ်၊ ဤအချိန်တွင်သင်သည်ချက်တင်စကားပြောဆိုခြင်းသို့မချိတ်ဆက်နိုင်ပါ၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါရန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
adriana hernandez အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ပြaနာတစ်ခုမည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ စကားပြောစကားပြောခန်းကိုကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းတွင်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများကို တင်၍ ကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါ၊ ဘာမှဖြစ်မလာပါ၊ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ Facebook မှာဘာပြသနာရှိသလဲ။
ငါ Facebook ပေါ်မှာနှစ်ပတ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို။ အဘို့စကားမပြောနိုင်ပါ! အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ... ယခုချက်ချင်းကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်လျှင်ဘာမျှမဖြစ်သွားပါ။ သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းများ၏ profiles များနှင့်အတူတူပါပဲ ... မည်သည့်ပြproblemနာကိုမျှမပြနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်ကိုပွေ့ဖက်ရန်ကျွန်ုပ်မည်ကဲ့သို့လုပ်သည် ???????? ………ငါ့ကိုမဖွင့်ပါ… ..
ဟယ်လိုမျက်နှာသူငယ်ချင်းများကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ၊ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းများကိုရှာတွေ့နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရှည်ဆုံးသူငယ်ချင်းများသည်အမြင့်ဆုံး Q ဤအရာသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှဤမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေကြားခဲ့သည်။ ပြနာ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌တူညီသောပြhadနာရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းပြီးပါပြီ၊ သင်တို့သည်ငါ့ကိုမယုံသော်လည်းအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သူတို့ Mozilla Firefox ၏ဗားရှင်းကိုအသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
PS IT ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook မှဖွင့်ရန်မနှိပ်လိုက်ပါကပုံရသည်။
မှတ်တိုင် JELDRES ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ မနေ့ကမွမ်းမံမှုများလက်ခံခဲ့ပြီးဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဝင်ရောက်ချင်ပါတယ်၊ မနေ့ကမှဆာဗာမအောင်မြင်သောကြောင့်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
PILAR JELDRES သို့စာပြန်ပါ
ငါ့မှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားတာ ၁ နှစ်ကျော်ရှိပြီ၊ ငါ့မှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါကဒီအကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး၊ ငါကအခြားတစ်ယောက်နဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်ပြီ၊ ၀ က်ဘ်သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင်ရှိနေပြီး၊ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်မှုကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါမပေးနိုင်ဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အတိအကျအတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်သည် Marymar နှင့်ကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်သည့်နေ့များနှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုမသိခဲ့ပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စကားပြောရန်ဘယ်လောက်ကြာကြာစောင့်ရမလဲ။ ဒါက ၃ ပတ်လောက်ကြာပြီ။ နေ့တိုင်းငါကြိုးစားပြီးအဖြေမရသေးဘူး။
ငါအကူအညီလိုတယ်၊ ငါဆက်သွယ်နိုင်လို့တစ်လလောက်ကြာပြီ ...
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတိုင်း .. တြိဂံပုံပေါ်လာတယ် .. "ဒီအချိန်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ချက်စကားနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူး"
ငါဒီအခြေအနေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး Facebook ဟာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလို့မယုံကြည်တော့ဘူး။ ၃ ပတ်လောက်ကြာပြီ၊ ငါမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး အဆိုးဆုံးကတော့သူတို့ပြusersနာကိုရှာတွေ့သူများစွာရှိပြီး၎င်းမှာပြုပြင်သူများဖြစ်ကြပြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူး
ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါအရာရာရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ “ Facebook chat သည်နည်းပညာဆိုင်ရာပြexperienနာများကြုံတွေ့နေရသည်” ဟု ပြော၍ ကျွန်တော်ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်သည်။ ဘာမှကောင်းပုံမရဘူး ငါမျက်နှာပြင်၏ 1/4 အနိုင်နိုင်တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်ငါ့အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ဘာမှမမွငျနိုငျ! ငါလည်းပြီးပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ facebook စာပုံးထဲတွင်စာများအားရက်ပေါင်းများစွာကြိုးစားဖတ်ရှုနေပြီး၎င်းကိုဖွင့်မထားပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်
ငါသည်လည်းငါ့စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည်နှင့်အင်တာနက်အမှားတစ်ခုရှိပါတယ်, ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သို့မဟုတ် restore ရန်ကြိုးစားရမည်
ကျွန်ုပ်သည် ၂ လတာ ၀ န်ယူအကောင့်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်နှင့်မည်သူ့ကိုမျှစကားမပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်အော့ဖ်လိုင်းကဲ့သို့ပေါ်လွင်ပြီး၎င်းတို့ကိုချိတ်ဆက်ထားကြောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်စကားပြောရန်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါ persna အဆက်ပြတ်ဘယ်တော့မှမ။
ငါ Facebook ကတဆင့်ဝင်သောအခါငါဖြစ်ပျက်
mozilla firefox ငါစကားပြောလို့မရဘူး၊ ငါ့အဆက်အသွယ်တွေကငါ့ကိုမမြင်ရဘူး
ငါ Facebook ပေါ်မှာအရာအားလုံးလုပ်နိုင်တယ် .. မထူးဆန်းဘူး k မယုံဘူး
ကောင်းပြီ၊ ငါဒီမှာဖြေရှင်းချက်တွေရှာနေတာပဲ၊ တူညီတဲ့ပြproblemနာမျိုးဒါမှမဟုတ်အလားတူပြproblemsနာမျိုးရှိတဲ့လူတွေထပ်တွေ့တယ်။
Ahmed က ဟုသူကပြောသည်
ငါ log in လုပ်တဲ့နေ့တွေတော်တော်များများရှိတယ်၊ သူကငါ့ကိုငြင်းပယ်တယ်။ နောက်တခါထပ်ထည့်ခိုင်းတယ်၊ ငါ HOME ကိုရောက်ရင်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးမှားတယ်၊ ငါ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေမတွေ့ရဘူး၊ အမှားအယွင်းများ၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ကိုနံရံများပေါ်တွင်တင်ခွင့်မပြုပါ။
ps သည်အခြား frens များနှင့်စကားမပြောနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည်
ဖြေရှင်းချက်အဘယ်သူမျှမ .. ! por favor
ငါတို့အားလုံးအတူတူပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ငါမမေးချင်ခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့မျက်နှာထဲမှာဖြစ်ပျက်တာပဲ။ ငါကငါ့ကွန်ပျူတာပဲလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်တူမကကျွန်တော့်ကို pc တောင်းပြီးပြproblemsနာမရှိဘဲဆက်သွယ်ပေးတယ်။ ငါဝင်ပြီးမင်းကိုဘာမှမကြိုဆိုဘူး၊ သူငယ်ချင်းမရှိဘူး၊ ငါ့ကိုငါ့နံရံပေါ်မှာရေးထားတာတောင်မှဖျက်လိုက်တယ်။ ငါကပြားနေတယ် !!!
ဒီဖေ့စ်ဘွတ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်လဲငါဆက်သွယ်မိပြီးငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောတာဖြစ်သွားတယ်။ ချက်ချင်းပဲဘယ်သူမှမရှိဘူး။ သူတို့အားလုံးပေါ်လာတယ်။ ဒီသူကပြောတယ်ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီဆိုတာကိုငါတကယ်မသိဘူး။ လိုအပ်သည် ...
diego fernando araque crtes ဟုသူကပြောသည်
ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများကျွန်ုပ်သည်အီးမေးလ်ထဲမ ၀ င်နိုင်သည့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလုံးကိုလှည့်နေသောကြောင့်ငရဲမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဒါကြောင့်ဒီ fuck ဆိုတဲ့လုပ်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ဖို့အတိတ်ဖြစ်သောကြောင့်မကြာမီဒီဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
diego fernando araque crtes အားပြန်ပြောပါ
ဒါပေမယ့်Feisbúကော။ သူကငါ့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတစ်နေ့လုံးကြိုးစားနေတယ်။ ပြုပြင်တာကနာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ကြိုးစားရမယ်။ ပြီးတော့ငါတစ်နေ့လုံးစမ်းသပ်နေတယ်။ မေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းစသည်ဖြင့်အချို့ရှိပါသည်။ ဒီလူတွေကိုဘယ်မှာဆက်သွယ်ရမလဲ။ နှင့်ငါ့ပရိုဖိုင်းကိုအိပ်ပျော်သောသူကို, နိုးထရန်ပြော !!!!
uiiiiiiiiii ငါ Facebook မှာဘာမှမလုပ်နိူင်ဘူး။ Facebook chat မသုံးနိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကငါ့ကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး၊ သီးခြားစာမျက်နှာမှာအမှားမရှိဘူး။ ဓာတ်ပုံတွေတင်လို့မရဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဘာတွေမှားနေတာလဲ xfa bye ကိုကူညီပါ
sebastian chimenti ဟုသူကပြောသည်
ငါ Facebook စာအုပ်ကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါနေ့ရက်များစွာကုန်လွန်သွားတာနဲ့ငါ့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုကပ်ထားဖို့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော့်အီးမေးလ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိုင်ပီလိပ်စာကစာမျက်နှာပြောင်းလဲခြင်းသည်အလွန်ကြီးသောအရာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ပြBနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးအကြောင်းကြားရန်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပြAနာဖြစ်လျှင်တောင်မှကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မသိပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပြPROနာဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြBနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ငါ့ပစ္စည်းကိရိယာသူတို့ငါ့ကိုအကြံပြု, ဒါမှမဟုတ်ငါကသူ့ကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လမ်းငါ့ကိုအကြောင်းကြားသော။ မင်းကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
sebastian chimenti အားစာပြန်ပါ
ကရုဏာ jauregui ဟုသူကပြောသည်
ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် Hotmail ကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုအမြဲတမ်းရေးသား။ မရပါ။ လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အဖွေတဈခု
mercy jauregui ကိုပြန်သွားပါ
Axel အလက်ဇန်းဒါး M က ဟုသူကပြောသည်
Poos Q ထိုပြWithနာနှင့်အတူနိုင်
စကားမစပ်ငါ့ကို add သင့်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်
Axel Alexander M ကိုစာပြန်ပါ
သင်၏ browser ထဲတွင်ကွတ်ကီးများကိုဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏လုံခြုံရေး ဦး စားပေးမှုများသို့သွားပြီးဆက်မလုပ်မီချိန်ညှိချက်များကိုပြုပြင်ပါ။
ငါ facebook ကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ၊ ငါ့ကိုဒီမှာငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအဲဒါကိုကျစေတယ်
ဒီသူကပြောတယ်မျက်နှာကိုမဖွင့်ပါနဲ့၊ ဒီနေ့ကျွန်မရဲ့အထွis်အထိပ်ရောက်နေပါပြီ။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများစွာအတွက်သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဖြေတစ်ခုပေးပါ။ တ ဦး တည်းသည်းခံခြင်းပေမယ့်ဤမျှလောက်မ!
ချက်တင်စကားပြောခသည်ဖွင့်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ် ၀ င်ရန်ကြိုးစားတိုင်း၎င်းပြသနာကိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးထွက်လာပြီး၎င်းသည်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့ကကျွန်ုပ် fcb ကိုရိုက်ထည့်။ မရနိုင်တော့ပါက reset password ပေးပြီးအီးမေးလ်လိပ်စာမတည်ရှိကြောင်းပြောပါသည် !!!!!
သူတို့ fcb မှသူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများနှင့်မှတ်ချက်များကိုကြည့်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏စာထဲတွင်သူတို့ရေးသားသည့်စာကိုကျွန်ုပ်မရရှိနိုင်ပါ။ FCB AYUDAAA ထဲဝင်လို့မရဘူး !!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ချက်တင်စကားပြောခြင်း၌လည်းအခက်အခဲများရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်အမင်းအသုံးမပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအချို့သောဂိမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အိမ်နီးချင်းများ (ဂိမ်းများမှ) ကိုမမြင်ရခြင်းနှင့် ငါသေချာပေါက်ခွင့်မပြုပါဘူးဂိမ်းများကိုငါကချိတ်ဆက်ထားရမည်ဟု msg ပစ် ?????? မည်သူမဆိုဘာလုပ်ရမည်ကိုသိပါသလား ???? ကျေးဇူးပြု
ဒါကြောင့်ငါမအပူတပြင်းဖြစ်၏ fixed မပေးပါ။ တစ်ခုခုလုပ်ပါ
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ၌ပြthoughtနာရှိသည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်း Artos သည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်။ ချက်တင်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်အပလီကေးရှင်းများ (မည်သည့်အရာ) ကျွန်ုပ်အတွက်မဖွင့်ပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်သတိပေးချက်များကိုမတွေ့နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်သူတို့မှတ်ချက်ပေးသော link ကိုတွေ့မြင်သည်။ link ကိုဖွင့်သော်လည်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်သောအခါမှတ်ချက်မရသောကြောင့် စာမျက်နှာကို update လုပ်ရန်ရှိသည်။ အမှန်တရားကတော့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်
ဒီအားနည်းချက်ကို FACEBOOK ကကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချဲ့ထွင်နိုင်သဖြင့်ဒီအားနည်းချက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ GAMES, APPLICATIONS, PHOTOS များတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ငါထင်မြင်ချက်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောရန်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တူညီသောပြAVနာရှိသည့်လူများဖြစ်ရမည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်သူမဆို MSN သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုအသုံးပြုရန်အစီအစဉ်ရှိနိုင်သည်။ ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
* အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဤအဖြေကိုဖြေရှင်းရန်လှည့်ကွက်တစ်ခုကိုသိလျှင် *
အစီအစဉ်ငါ Farmville ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှဖွင့်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် load ၏အလယ်တွင်ရှိနေပြီးအခြားကွန်ပျူတာများမှငါ့ကိုဖွင့်လျှင်ဘာဖြစ်မည်၊ မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်သင့်သည်ကိုသိလိုသည်။
ငါဘာလို့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမ ၀ င်ရသေးတာလဲငါ Facebook မှာရက်ပေါင်းများစွာမဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး
ငါသိတယ်မင်းငါချက်တင်စကားပြောတာမှာအခက်တွေ့နေတယ်၊ ​​၂ ပတ်လောက်ငါစကားပြောလို့မရဘူး၊ သူကငါ့သူငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့အွန်လိုင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတာပြတဲ့အခါသူကသူတို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုက်ပြီးသူကငါ့ကိုပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာသူကကျွန်တော့်ကို ၁၅ ယောက်လောက်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ min ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေသူတို့သူတို့ကျွန်မဆီကိုလာကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ပျင်းလာပြီးငါ့ကိုစာမရေးတော့ဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှိသည်¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡… Facebook people Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook ပြthemနာကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုသုံးသောလူတန်းစားများဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့၏အကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင်သိသည်။ .iop ငါစကားပြောချင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆက်အသွယ်များကိုရရှိသည်။ x ယခုအရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ စကားပြောသောအခါသူတို့ရရှိနိုင်သောသူများနှင့်စကားပြောလိုလျှင် ... နှင့်စကားဝှက်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်သောအခါ ...... ငါသူတို့အဆက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာရတယ်။ ငါစာမျက်နှာကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ တစ်ခုခုပြန်ပို့တဲ့အခါမှာအဲဒါကိုပြန်ရရှိနိုင်တယ်။
ဟိုင်း!!! ငါ facebook မှာရက်အတော်ကြာဆက်သွယ်နေတယ်၊ ​​ဒါကငါ့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ မှတ်ချက်တွေမရေးနိုင်ဘူး၊ နံရံပေါ်မှာရေးရေး၊ ဂိမ်းကစား၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေဖတ်လို့မရဘူး။
ဘာကြောင့်လဲ၊ မွမ်းမံမှုတစ်ခုထည့်သွင်းဖို့လိုမလိုငါမသိဘူး။ အဲဒါကျွန်တော့်အတွက်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့သလိုအကူအညီလိုတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏စကားဝိုင်းသည် ၂ ရက်ကြာမဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ရိုက်ထည့်ပြီးကျွန်ုပ်၏ chat အခြေအနေသည်အဆက်ပြတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်၎င်းကိုခွင့်ပြုသည့်အခါသူငယ်ချင်း2၀ င်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည် ဒါပေမယ့်သူတို့က ... ဘယ်သူ့ကိုမှငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ကူညီနိုင်လျှင်
emm !!!! MIO CHATTT ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ငါအားလုံးချိတ်ဆက်အဖြစ်ထွက်ခွာရန်! သို့သော်ထိုအခါငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ WINDOW ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အိုင်တီသူနဲ့ချိတ်ဆက်မထားဘူးငါ့ကိုပြောပြတယ်! AND ဒါအိုင်တီငါ့ကိုဖြစ်ပျက် TOODOSS! ချိတ်ဆက် 30 အဆုံးတွင် !! 0
…။ ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကသူတို့ချိတ်ဆက်မိပြီ! AAAAAAAAAA ငါ့ကိုဒီလောက်ပြင်းထန်စွာပေးသည်ငါသူတို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်
gonzaloooooo ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည်။ !!!!!!
ပြီးပြီဖြစ်သောမျက်နှာပေါ်မှာ chat ဖို့ Mombe cule de falla
ဟဲလို…ငါမျက်နှာလွှဲရန်ပြPROနာပေါင်းများစွာရှိသည်။ ပို၍ ကောင်းသည်ဟုပြောခဲ့သည်ငါဆိုင်းအင်မ ၀ င်နိုင်ခဲ့…သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြသနာမဟုတ်ပါကအခြားစာမျက်နှာများတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
အချို့သောဖြေရှင်းချက် PLIIIIIIIISSSSSSS ပေးပို့ပါ
အကူအညီမရ။ ကျွန်ုပ်သတင်းကိုမတွေ့နိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုမတွေ့ရပါ၊ သို့မဟုတ်သူတို့ကိုရှာဖွေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဘာမှမလုပ်ပါနှင့်
ဖေ့စ်ဘွတ်ချက်စကားပြောဆက်သွယ်မှုပျောက်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်စကားဝိုင်းသို့ ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ပါဟုထင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာမှအခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှဖြစ်လျှင် ... ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ ???
jaime mesa စုံတွဲကိုပြန်ပို့ပါ
ဆက်သွယ်မှု0အဆက်အသွယ်နှင့်အတူ
ငါ3ရက်အဘို့ဤကဲ့သို့သောခဲ့ကြ !!!
xfa ဖြေရှင်းချက်ဒီအစာရှောင် !!!!!!!
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါချိတ်ဆက်ထားပုံရတယ်၊ ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးချိတ်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုစာပို့ချင်ရင်ပြသနာကမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး၊ ဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်းခံရဖို့စာမျက်နှာကို update လုပ်ဖို့ကအရမ်းစိတ်ပျက်စရာပဲ!
franki yair vidal ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
franki yair vidal အားစာပြန်ပါ
ဟုတ်ကဲ့? Ï? ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်လည်းထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းစာရင်းကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ၀ င်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်ထားခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ဆက်သွယ်မှုမပေါ်လာပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျများ !! ငါတစ်လကျော်ဘို့ဤကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖြေရှင်းချက်ကျေးဇူးပြုပြီး!
ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းကို ၀ င် ရောက်၍ ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များကိုမမြင်ရသည့်အချိန်မှတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ
ကျွန်ုပ်သည် Facebook သို့သွားပြီးချက်တင်သည်အလုပ်မဖြစ်ကြောင်းသူတို့သိကြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာပြtheနာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အကယ်၍ သူတို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Firefox ဗားရှင်းမရှိပါကတစ်ခုသည်ပြproblemနာတစ်ခုထက်မကရှိလိမ့်မည်။ ၄ င်းသည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအမြဲတမ်းမွမ်းမံရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Firefox ဗားရှင်းရှိခဲ့သည်၊ ၎င်း မှလွဲ၍ မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် RAM အမြောက်အများကိုလောင်ကျွမ်းသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်မှီခိုခဲ့သည်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချက်တင်မဖွင့်ပါနဲ့။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးနောက်ဆုံးပေါ် Firefox ဗားရှင်းကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းလွင့်စေတယ်😛
နှုတ်ဆက်ခြင်း .. နှင့်သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ PC စနစ်၏အကျဉ်းသားများဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်သင့်ကိုအမြဲတောင်းခံနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးသောအခါကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်သည်ချက်ချင်းပေါ်လာပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
gladys isabel သို့ပြန်သွားရန်
တကယ်တော့ငါ kga dl မျက်နှာနဲ့ပျင်းလာတယ်။ »စင်ကြယ်သောdla sek »
ယခုငါစင်ကြယ်သော msn ကိုအသုံးပြုသည်အလွန်မြန်သည်နှင့်အဆက်ပြတ်ဖြစ်ပျက်မဖြစ် ...
မျက်နှာအသုံးပြုသောသူတိုင်းတစ် ဦး အကြံပြုချက် ... ။ msn သို့ပြောင်းပါ…။ ပိုကောင်းတယ်… !!!!!
တကယ်တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ msn လိုတစ်ခုခုကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာအောင်စောင့်ဆိုင်းပါ။
xaoop နှင့် aganme ကိစ္စတွင် ......
glady isabel အတွက်သင်စကားဝှက်ကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ စုံစမ်းသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်“ အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်အမှားအယွင်းများရှိသည်” လို့အမြဲတမ်းပြောတာတစ်လကျော်သွားပြီ။ ဘာကြောင့်လဲ။
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ၁ ပတ်လောက်ရောက်နေပြီးငါ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ နာရီပေါင်းများစွာပိတ်ဆို့ထားရတယ်၊ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ??????????
Adrian Calderón andrul ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်တွင်စကားပြောရန်ရက်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်အဆက်ပြတ်ပုံရသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်မည်သို့မည်ပုံလုပ်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရပါကမီးခိုးရောင်မီးရောင်များပေါ်လာပုံနှင့်မည်သို့ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုပြတ်တောက်သွားစေသည်။ အစိမ်းရောင်ပြောင်းပါ
adrian calderon andrul သို့ပြန်သွားရန်
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာကုန်ကျသည်၊ ချက်တင်ဘယ်တော့မှဖွင့ ်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းများကိုရှာသည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောစာမျက်နှာမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်အလွန်စိုးရိမ်သည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ chat တစ်ခုခုနဲ့လုပ်ဖို့ရှိသလား
maria magdalena အားပြန်ကြားပါ
သင်၏ဗားရှင်း Mozilla Firefo ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ ဤအရာအားလုံးသည်ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤ wea77 တွင်ပြန့်နှံ့နေပြီးဖြစ်သည်
ဟယ်လို၊ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။ ငါ Facebook စာအုပ်ကိုချက်ချင်းဝင်ချင်တယ်။ စာတိုနဲ့ငါကိုဝင်းဒိုးတစ်ခုတင်လိုက်တယ်။ ငါကငါ့အကောင့်ကိုလက်လှမ်းမမီနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာ။ ???? ကျွန်ုပ်၏ငွေစာရင်းသည်ဤအခြေအနေနှင့်အညီအမြဲတမ်းရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်……
rosa suarez သို့ပြန်သွားရန်
ဓာတ်ပုံတစ်ချောင်းထိုးချင်တယ်၊ အမှတ်အသားပြုလို့မရဘူး၊ pc ကို restart တောင်လုပ်ရမယ်၊ ဘာလုပ်လို့လဲ၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုချက်ချင်းစကားပြောရန်လိုအပ်သည်။ မျက်နှာမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောပါ။ အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်မည်လဲ ...... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်မရဲ့မိသားစုနဲ့တောင်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနေရာတစ်ခု ...
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့သည့်ချက်တင်ထဲသို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသည့်နေ့ရက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ရွေးလိုက်သောအခါ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားပြီး၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံမရ။ x faa ကကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပါ။ ((( စိတ်ပျက်လက်ပျက်ငါ Facee ချက်တင်ကြိုက်တယ်
ငါ GGRAAciaas အတွက်အကူအညီမျှော်လင့်ပါတယ်: :))
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာမှကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာမှမရရှိနိုင်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ၎င်းသည်စကားဝှက်သည်မှားသည်ဟုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်သည်မမှန်ကန်ကြောင်း၊ သို့သော်အခြားကွန်ပျူတာမှဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်မည်သို့မည်ပုံဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိပါ၊ အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပါပြီ။ cookies များကိုလည်းဖျက်ပစ်ပြီးကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုလည်းမသိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
ဖြေရှင်းနည်းကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ သူတို့လုပ်ရမှာကသူတို့ browser တွေကို update လုပ်ဖို့ပါ။ firefox version ကတော့ version 3.5 ပါ။ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် internet explorer browser ကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် ...
PATRCIA CRISOSTOMO ဟုသူကပြောသည်
PATTY ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေပြီ Q ကျွန်ုပ်၏ Facebook Book တွင်ချက်တင် ဆက်သွယ်၍ မရပါ၊ ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာကိုလျှောက်ထားရန်ကြိုးစားပါ။
PATRCIA CRISOSTOMO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
နေ့ရက်များ facebook ကငါ့ကိုမှတ်ချက်များသို့မဟုတ် chat ကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးကြောင့်သူကစာမျက်နှာပေါ်တွင်အမှားငါ့ကိုပြောပြသည်နှင့်အခြားသူများမှာမမျက်နှာကိုဖွင့်တဲ့အခါမှသာ, ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီ !!!!!!!!! ငါမှတ်ချက်ပေးနိုင်သလိုဘာမှလုပ်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်ရူပဗေဒ ,,, နေ့ရက်များစွာအဘို့အကြှနျုပျ၏ Facebook စာအုပ်ငါ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဒီနည်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပေးပါ။
ငါစကားဝိုင်းမှာပြPROနာတွေရှိတယ်၊ EXPLORER ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အိုင်တီပြHနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင့်ကိုသုံးပုံနှစ်ပုံ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဒါမှမဟုတ် Facebook မှာပြPROနာတစ်ခုရှိရင်၊ ဒီတော့ပြMနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ပြရန်သင့်အတွက်အလွန်သင့်တော်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ရှိရင်သူတို့သိပါစေ။
Marianne လာရာ ဟုသူကပြောသည်
ငါအရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်၊ ငါ Facebook ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှတ်ချက်တွေမပေးနိုင်တာ၊ ရက်ပေါင်းများစွာဓာတ်ပုံတွေမကြည့်ရသေးဘူး ... ချက်တင်စကားပြောလို့မရဘူး .... ကျေးဇူးပြုပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အများကြီးမေးပါ။ အတူတူပါပဲအသုံးပြုသူများ၏ ... ..sprando အဖြေနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် mxas .........
Marianne Lara အားပြန်ကြားပါ
mirko valdivia araya ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်ထားသောကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများထံစာများပို့သောအခါဤကဲ့သို့သောပိုမိုနည်းသောအရာများပါသောစကားစုတစ်ခုရှိပါသည်။ »ယခုအချိန်တွင် Facebook Chat နှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ » မျက်လုံးပြူးသွားလျှင်အခြားသူများကကျွန်ုပ်အားမဖြေနိုင်ကြပါ။ အပေါ်မှထပ်ပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အဆက်ဖြတ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းခံရသည့်အခါကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုအဆင်သင့်ထားပြီးဖေ့စ်ဘွတ်သတင်းသို့ပေးပို့ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ရှိအခြားသူများသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားကျေနပ်လောက်သောအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အချို့သောတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မည်သူမျှကြည့်ရှုရန်သွားမည့်ကိရိယာမဟုတ်ပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် msn နှင့်ဤချက်တင်သည်တစ်ခုတည်းသောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငါတို့နှင့်ရင်းနှီးသော၊ အဝေးမှသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှတားဆီးနေသောဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပါ။ နောက်မှတွေ့ပါလိမ့်မည်။
mirko valdivia araya သို့ပြန်သွားရန်
အပေါ်ကပြတင်းပေါက်အနည်းငယ်ပေါ်လာတဲ့သူနဲ့စကားပြောချင်ရင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာပြသနာတွေရှိတယ်၊ သူတို့က plugins တွေလိုအပ်တယ်၊ သူတို့ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာထဲမှာငါ့အတွက်ထည့်သွင်းတဲ့ပညာရှင်ဆီကိုယူဆောင်သွားရမယ်။ ၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ပလပ်အင်ထည့်သွင်းမှု install လုပ်ခြင်းသည်မှားယွင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်
Chatting ဟာကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်သူမှဘယ်သူမှမချိတ်ဆက်ဘူးလို့ငါပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ငါသိတယ်။ ငါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု (applications များ၏ configuration ကို) သို့သွားခြင်းအားဖြင့်ထိုပြsolနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်ငါ petville ပျော်ရွှင်ငါးမွေးကောင်ကဲ့သို့အားလုံးဂိမ်းများကို ... အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လယ်ယာ ville မှလွဲ။ ... ငါပြproblemsနာများဘယ်တော့မှမ ... နှစ်ခုဂိမ်းများနှင့်အတူ ... ချက်တင်ငါ့ကိုအမှုဆောင် ... ။ ဤဂိမ်းများသည်ချက်တင်နှင့်လုပ်ရန်တစ်ခုရှိသည်။ မည်သည့်ဖွဲ့စည်းမှုမျှစာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ချက်တင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကူညီမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိစကားဝိုင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းပါ။ ဆက်သွယ်မှုရှိပါကသို့မဟုတ်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အခွန်အသစ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါသလား။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေပြီးသောသင်၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်မမျှတပါ
ဘာလို့ Facebook chat ကိုမဖမ်းချင်တာလဲ၊ ငါ့ကိုပြင်ဆင်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကိုမေးပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားချက်တင်စကားပြောပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ Facebook chat နှင့်ပြaနာရှိသည့်လူများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ချက်တင်စကားပြောသောအခါချက်တင်ကိုမပေးသောလူများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝါကျများကိုပြောသောကြောင့်ကွန်ပျူတာပြtheနာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပါ။ သူအချိန်ရှိလျှင်သူသည်ယခုအချိန်တွင် Facebook Chat နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြင်ဆင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှတ်ချက်ပေးသူအားလုံးကကွန်ပျူတာပျက်နေရင်…။
ငါ့မှာရက်ပေါင်းများစွာရှိပြီးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဖွင့်တဲ့လတစ်လနီးပါးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်တိုအတွင်းအမှားအယွင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီးစာမျက်နှာပိတ်သွားသည်၊ ၎င်းသည်နည်းနည်းကြာသော်လည်းမည်သို့ဖြစ်သွားမည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်
တစ်ပတ်ကျော်လောက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာမဆိုငါ UY ဆီကစာရတယ်။ error အမှား… message tray ကိုကျွန်တော်မဖွင့်နိုင်ဘူး၊ မှတ်ချက်ရေးလို့မရဘူး၊ ဖွင့်လို့လည်းမရဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကို update လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်သည့်အခါတိုင်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကကျွန်ုပ်တို့အားအခြားရွေးချယ်စရာ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကိုအသစ်ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကို update လုပ်တိုင်းမျက်နှာပြင်သည်ပိတ်သွားပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ လိုအပ်သည်။ ဒီပြfixနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
ကျေးဇူးပြု, အဖြေ YAAAAAA !!!!! ဒီနည်းကို DESPERATE IS ....
သူကကျွန်တော့်ကို ၀ င်ခွင့်၊ အကုန်လုံးကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခွင့်ပေးတယ်။ သူကငါ့ကိုဘာမှမှတ်ချက်ပေးခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်နံရံပေါ်မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကိုတင်ဖို့ကြိုးစားဖို့အချိန်တော်တော်များများလိုတယ်၊ ပြီးတော့ kabo de komo 1 မိနစ်ငါရတယ် UY ကိုပြောတာကငါတို့မှာပြproblemsနာတွေရှိနေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်တယ်၊ သူတို့ကအဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​အဲဒါကငါ့ကိုစာပို့ခွင့်မပြုဘူး၊ ငါသူတို့ကိုရက်ပေါင်းများစွာပြန်လည်သုံးသပ်ချင်နေတယ်၊ ငါ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း applications များ၊ တူညီသောစာကိုပေးပို့ပါ။ ဤသည်မှာအပူတပြင်းဖြစ်နေပြီ၊ ကျွန်ုပ်အားလုံးကိုမြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်မလုပ်ပါနှင့် .. -.-
နင့်ကိုငါအရမ်းချစ်တယ် .. နင်ငါ့ကိုနင့်အနားမှာထားခဲ့တာလား .. နင်ငါ့ကိုအရမ်းချစ်တယ် .. နင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်။ နှုတ်ဆက်ပြီးသူတို့အခုငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမလားကြည့်ပါ ဦး
Juan Ramon ဟုသူကပြောသည်
ငါတူညီတဲ့ပြBနာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ငါဖိုရမ်အားလုံးကိုသွားပြီးဖြေရှင်းချက်တွေအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ EXPLORERS ကိုမွမ်းမံခြင်းဖြစ်သည်။
EXPLORER သို့မဟုတ် FIREFOX နှင့်အတူလမ်းမလျှောက်ခဲ့ပါ၊ EXPLORER 8.0 နှင့် Firefox 3.6 ။ ယခုငါနှစ် ဦး လမ်းလျှောက်။
juan ramon အားပြန်ကြားပါ
tr4d / လိုလားသူဟက်ကာ / v32 ဟုသူကပြောသည်
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ application applications များထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက် edit applications များထဲသို့ဝင်ပါ။ သင်လုပ်သင့်သောအရာသည်ယခင်ကသတ်မှတ်ထားသည့် applications များ (ain ... ninja ကဲ့သို့သောဂိမ်းများ) သို့မဟုတ်အခြားအရာများအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့နောက်ဘေးက x ​​ကိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
tr4d / လိုလားသူဟက်ကာ / v32
tr4d / pro-hackers / v32 သို့ပြန်ပို့ပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားအကြံပြုချက်များအတွက်ဖွင့်ပြီးသည့်နောက်တွင်တူညီသောအီးမေးလ်ဖြင့်ဖွင့်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ယခုသူသည်အခြားအီးမေးလ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုအတည်ပြုသော်လည်းမအတည်ပြုရသေးကြောင်းနှင့်မည်သို့အတည်ပြုရမည်ကိုအီးမေးလ်ပို့ကြောင်းပြောကြားသည်။ အကောင့်ပေမယ့်အခုထိဘာမှမရှိဘူး .. ငါ့ကိုကူညီပေးပါ XFA ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ............ ????????????? '
ငါအတူတူပဲဖြစ်ခဲ့တာသင် XFA ငါ့ကို FACEBOOK မပါဘဲမနေနိုင် ... ငါ့ကို .... ကူညီပေးပါ .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမကြာသေးမီကထည့်သွင်းထားသော application များဖယ်ရှားပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်🙂
နင်ဘယ်လိုနေလဲ။ ငါချတ်ထားသည့်သူငယ်ချင်းများ GUANDO အတွက်စာပို့တဲ့အခါငါရေးပြီးတဲ့အရာကိုကြည့်နိုင်တဲ့ငါ့ရဲ့ chat ကို update လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ကျွန်ုပ်၏စကားဝိုင်းသည်တစ်လကျော်ကြာအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ Facebook နှင့်မည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ပြproblemsနာများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်လျှင်ကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
x favoorrrr! အဖြေတစ်ခုလို ... အင်တာနက်သမိုင်းကိုဖျက်ပစ်ပါ။ nunka အစုလိုက်အပြုံလိုက်စကားပြောခြင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ 🙁
ကောင်းပြီ။ အကြောင်းပြချက်ကအဲဒါကို facebok ထဲမှာထည့်ထားပေမယ့်ဘာမှတ်ချက်မှမရေးနိုင်ဘူး
Serch Be ပါ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ FB မှချက်တင်ဆက်သွယ်မှုကိုဖြတ်တောက်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှသာလျှင်ဆက်သွယ်မှုမပြုနိုင်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
Serch Be အားစာပြန်ပါ
ငါဖေ့စ်ဘုတ်မှာမည်သူမဆိုနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ၊ သို့သော်အခြား pc တစ်ခုနှင့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
ငါပေးပို့ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးလိုက်ပြီးတော့သူကလူတိုင်းနှင့်အတူ, ဒီလူကိုအဆက်ပြတ်ကြောင်းပြောတယ်။ မနေ့ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငါ့ pc ထဲကိုဝင်ပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်တယ် ...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ fb chat မှာစကားပြောချင်တိုင်းငါပြောတယ်၊ ဒီတစ်ခုပြတ်တောက်သွားပေမဲ့တကယ်ချိတ်ဆက်နေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်တာလဲ။
ငါချက်တင် ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ချင်သူတိုင်းအော့ဖ်လိုင်းပုံပေါ်သည်နှင့်ချက်ချင်းပြင်ဆင်ရမည်
တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုအဖြေပေးနိုင်မလား? pleaserrr !!!!
hello my name is claudio၊ ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းပုံသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းများ၏ဓါတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အားပြtheနာကိုအဖြေရှာရန်သင့်အားအလျင်အမြန်တောင်းဆိုသည်၊ ရုတ်တရက်ငါ mause ၏ဒုတိယခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဓာတ်ပုံများကိုပိတ်ဆို့ရန်ကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည် အဲဒါနှိပ်ပြီးငါအီးမေးလ်ဘာမှမတွေ့ဘူး gonzalez.azulita@gmail.com
Pucha ငါနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်ုပ်၏ FB ချက်စကားသည် not တြိဂံအားအာမေwithိတ်နှင့်ထွက်လာသည်မဟုတ် connect
ကောင်းပြီ၊ ငါဖွင့်လိုက်ရင် facebook မှာပြaနာရှိနေတယ်၊ ​​စာမျက်နှာကအမှားတစ်ခုပြောတယ်၊ ဘာကြောင့်ငါမသိတာလဲ၊ ဘာလို့မှတ်ချက်ပေးလို့မရဘူး၊
ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ပြီး kargar ကိုစတင်လိုက်သည်
Internet Explorer သည်ဝဘ်စာမျက်နှာကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုမဖွင့်နိုင်ပါ၊ မျက်နှာမျက်နှာပြင် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာအားလုံးထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤသည်မှာတစ်ပါတ်နှင့်ရက်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ပြီးသောအရာအားလုံး။ ငါဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါ့ကိုပြောပေမယ့်ဘာမှအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်, ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောကြောင့်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - bsss
ကောင်းပြီမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ကြွင်းသောအရာထဲသို့ဝင်ရန်စီမံနိုင်လျှင်၎င်းသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတောင်းသောစကားဝှက်ကိုရေးရန်ကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းကိုပေးရုံသာမကကျွန်ုပ်နှင့်ထပ်မံဆက်သွယ်သင့်ကြောင်း၊ တ ဦး တည်းတူညီတဲ့ပြောင်းလဲမှုစူးစမ်းအတွင်းမှာလုပ်နှင့်ငါပြhaveနာများနေသောငါတို့ရှိသမျှသည်အဖြေကိုတန်ဖိုးထားဘာမျှမကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် Fecebook chat နှင့်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချိန်၌ FACEBOOK chat နှင့်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်ကျွန်ုပ်အချိန်မရွေးမဖြစ်နိုင်ပါ။
ထိုအခါငါသာ disconnect လုပ်ဖို့ option ကိုရပေမယ့်ငါဆက်သွယ်မရဖြစ်၏။
သူတို့တပြိုင်နက်တည်းဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် - အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမယ့်အမှားများနဲ့အဆင်သင့်လုပ်ပါ
ဓာတ်ပုံတွေ upload လုပ်လို့မရဘူး။ နံရံတွေမှာရေး၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုကြည့်ပါ၊ မှတ်ချက်တွေရေးပါ၊ ဘာတွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တကယ်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အနမ်းတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပါ
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ Facebook chat အားမည်သည့်အချိန်တွင်မသေဆုံးနိုင်တော့မည်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဖြေရှင်းမည်နည်း။ “ ယခုအချိန်တွင် facebook chat နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ” ဟုအမြဲတမ်းပေါ်လာတတ်သည်။ သူတို့သည်အမြဲတမ်းလိုအပ်သောပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည် xd
မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ၊ ဒီဟာကထူးဆန်းတယ်၊ ငါအဲဒီစာမျက်နှာပေါ်လာတာငါတွေ့တယ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူငယ်ချင်းအသစ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်သည်။ 🙂
claudio perez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်မှာမမှန်ကန်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှကျွန်ုပ်ဘာအကူအညီတောင်းသည်ကိုမသိပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပြင်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်များပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါတစ်နေ့လုံးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ ကံကောင်းတာကမင်းကငါ့အတွက်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမလားကြည့်ကြည့်ပါ ဦး
Iv @ n ဟုသူကပြောသည်
mmmmm ဒီနေ့ချက်တင်စကားပြောတာငါအတူတူရတယ်၊ ချက်တင်စကားပြောလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်စာမျက်နှာတစ်ခု (သို့) အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဘာပြproblemsနာတွေလဲ .. ??? ငါ့ကိုဖြေရှင်းပေးပါ။ !!
Iv @ n အားပြန်ပြောပါ
ငါ yoville နှင့် farmville ကစားကတည်းက Facebook ဟာရူးသွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများ၏ဓါတ်ပုံများကိုမမြင်နိုင်ပါ။ အားသွင်းနေသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှအားမသွင်းဘူး။ အကောင့်ကိုတောင်ဖျက်ခွင့်တောင်မရနိုင်ပါဘူး !!!!! ထူးဆန်းတာကသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးဟာစာမျက်နှာကိုပုံမှန်နှင့်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲအသုံးပြုကြသည်။
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာပြaနာရှိပါသလား။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြTHEနာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ကိုသိလျှင်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဝင်ရောက်သည့်အခါနှစ်ရက်အကြာ http://www.facebook.com အင်တာနက်ရှာဖွေသူကစာမျက်နှာကိုမပြနိုင်ဘူး၊ ပြproblemsနာတွေလည်းရှိတယ်၊ အဲဒါကဖွင့်လို့မရတဲ့တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုလိုတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
edwin saavedra ဟုသူကပြောသည်
edwin saavedra အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းအတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဟဟ၊ ဒါက shit ပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအရာအားလုံးကိုအရင်ပြောခဲ့သလိုပြောင်းလိုက်တယ်။
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှားအယွင်းတွေပါတဲ့သေတ္တာတစ်လုံးအမြဲတမ်းရတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး၊ ငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအွန်လိုင်းပေါ်လာလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား home page ကိုနှိပ်သောအခါသူတို့နှင့်တွေ့ရန်သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်စကားပြောရန်အခွင့်အလမ်းမပေးလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားသူတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များသို့ပစ်ချခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ option က plissssssss ကိုမကူညီနိုင်လို့ပါ
ကျွန်တော့်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးနိုင်မလား Facebook ကကျနော့်ကွန်ပျူတာမှာဖွင့်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည် Facebook တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကိုလုပ်နေစဉ်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်ဟုထင်ပြီးယခုကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်တိုင်းထိုစာမျက်နှာသည်အမြဲတမ်းပိတ်သွားသည်။ ထိုအလည်းသတင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်။ ငါအကူအညီ rigth noat လိုအပ်ပါတယ်။ xfiss ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ပြBနာများကိုစကားပြောရန်ရပ်တန့်စေပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်အားသူတို့ကိုပြေလည်စေပါကပြPROနာများကိုသဘောပေါက်လျှင် ၅ နှင့်လူတိုင်းကထိုအမေရိကန်ကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ပါ
Judith Astudillo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Feis တွင်တွေ့ရသောဘားနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောအရာကျွန်ုပ်သည်မည်သူ့ကိုမျှစကားမပြောနိုင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကထိုပြproblemနာကိုမည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်သိလျှင်လပေါင်းများစွာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂ လကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်သူမနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ။ xfa ia xauuuuuuuuu
Judith astudillo ကိုပြန်ကြားပါ
MY FACEBOK ၏ချက်တင်မချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အပတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်“ ငါ Facebook FATCHOOK CHAT နှင့်ဤအခြေအနေမျိုးတွင်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ ”
cecii curilen ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကို Facebook မှမှတ်ချက်ပေးရန် (သို့) ၂ ရက်ထက် နည်း၍ ကျွန်ုပ်ကိုစကားပြောခွင့်မပြုပါ။ မည်သည့်အကူအညီမလဲ။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ? ကျေးဇူးပြု၍ cntesten 🙂
cecii curilen အားပြန်ကြားပါ
တစ်ရက်မှာသူဟာကျွန်ုပ်ကို Facebook chat စကားပြောခွင့်မပြုပါ။ သူကသူမရရှိနိုင်ကြောင်းပြောပြီးသူဆက်နေမှာပါ။
Iris Barrios ဟုသူကပြောသည်
ငါ Pag ရှိသည်ကတည်းကအမှန်တရား။ အကြိမ်အနည်းငယ်ပဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ကမဖြေရှင်းနိုင်လို့ပါ။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုစကားဝှက်အသစ်တစ်ခုတောင်းတယ်။ သူတို့ကမပို့ဘူး
Iris Barrios အားပြန်ပြောပါ
Star Dominguez ဟုသူကပြောသည်
fb ပင်မစာမျက်နှာငါထွက်လာသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပင်မစာမျက်နှာ၊ ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှမထည့်သွင်းပါ၊ အဘယ်ကြောင့် ... ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Estrella Dominguez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်စကားပြောရန်အဘယ်သူမျှမရှိပါ။ ဖြစ်ပျက်မှုများကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းတော့မည်။ ထိုကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသစ်သည်ပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုစာစောင်များတွင်ကပ်ခြင်းမပြုပါ၊ @ ကိုနှိပ်ပါ။ စာရင်းတွင်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကိုတင်ရန်အတွက်တင်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသိလျှင်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
xq ကိုယ့်မျက်နှာချက်တင်မဖွင့်နိုင် xfa cm
နှင့် code ဘားမှားသည်စင်တီမီတာငါသည်ဤ fix နိုင်ပါတယ်
T_T « _ »
T_T « _ » (-_-)
haq pong ^ _ ^ ငါ့အီးမေးလ် cristian_mepillaron@hotmail.com
ငါ့မျက်နှာ CRISTIAN CAMILO ABELLA CASTILLO
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့် Facebook မှတဆင့်စကားပြောလိုသောအခါကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်သောအခါ၎င်းမှ၎င်း၏အခြေအနေကိုအဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းမှအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ဒီပြsolveနာကိုဘယ်သူဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲ ???
AI PORF AREGLEN EL CHAT PORFIS ကိုတစ်စုံတစ်ရာ AGAN ……… .SE K သည်လူအများစုကအမြဲတမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့မလှည့်ပါ……………………… SIIIIIIIIIIII
ဘာတွေဖြစ်နေသလဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါချက်ချင်း Facebook ထဲဝင်တဲ့အခါငါအမှားတစ်ခုရပြီးအရာရာတိုင်းရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲ။
ချက်တင်အလုပ်မလုပ်သေးသည့်မျက်နှာနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ငါကလိုအပ် !!
Cristian Vargas ဟုသူကပြောသည်
compadre ငါ facebook မှာစကားမပြောနိုင်ဘဲ ၂ လလိုပြpleaseနာကိုဖြေရှင်းပြီးရင်အရေးတကြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
Cristián Vargas အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ အာဂျင်တီးနားကယောက်ျားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ သူတို့ပျော့ပျောင်းလာတာကိုကြိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်နာမည်က Maria de Mar del Plata ပါ
mii fb ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစာမျက်နှာရှိ mii password ii zale အမှားကိုမရေးနိုင်ပါ
ke ahgoo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ¬¬
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မျက်နှာမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ ဖိတ်ကြားခြင်းများကိုလက်ခံခြင်းမပြုနိုင်ပါကဘာမှမလုပ်ပါ။ !!!! ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းမှာစာမျက်နှာအမှားတစ်ခုရလို့၊ ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော့်ကိုမကြာခင်ကူညီပေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟေ့လော့လော့၊ ငါ့ကိုငါ့ကိုစကားတောင်ပြောခွင့်မပြုဘူး၊ စက်ကငါ့အတွက်အရမ်းနှေးတယ် ... စသည်တို့ ...
locko တစ် ဦး ရှုပ်ထွေးမျက်နှာ ... uu အောင်ဖြစ်ပါတယ်
ငါဆက်သွယ်မှုနှင့်အရာအားလုံးဆက်သွယ်နိုင်လျှင် Facebook chat တွင်ပြသနာများရှိသည်။ ငါစကားပြောရန်သူငယ်ချင်းရွေးလိုက်သည်နှင့် ၄ စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင်သူသည်အဆက်ပြတ်နေပုံရသည်။
ဘယ်လောက်ငါ AREGLAR နိုင်, ငါအရေးပေါ်ဖြစ်၏!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေခြံ towm ကိုတစ်ပတ်မျှမတတ်နိုင်ပါ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဂိမ်းကိုယူသွားပြီး၎င်းကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ… Facebook ကကျွန်တော့်ကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး………… .. » !!! ငါ့ကိုစိတ်ကုန်စေတယ်၊ ​​ဘာလုပ်ရမလဲ ???
ငါ့ရဲ့မျက်နှာကမှားနေတယ်။ ငါ့မှာရှိတဲ့စာတွေကိုငါမဖတ်နိုင်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ အခြားဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ကိုမှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူး။ xqq? q ondaa ?? ..
ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဆိုးရတာလဲ .. ပြီးတော့ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ် !!!!!
ငါယခုပြproblemနာကိုအဖြေတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ် x fii!
ငါမှာအတူတူပင်ပြandနာရှိတယ်၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေလည်းထွက်မလာကြဘူး၊ ငါမှာထပ်ထည့်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်။ ဒါကဖြစ်ပျက်နေတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။
ငါ Facebook မှာစကားပြောတာမှာပြသနာတွေရှိတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေအွန်လိုင်းမလာကြဘူး၊ ဓာတ်ပုံတွေဖွင့်လို့မရဘူး၊ မှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူး၊ သူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုမတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည် "ယခုအချိန်တွင် Facebook Chat နှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ" ဟူသောစာကိုရပြီးရက်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်အဆက်အသွယ်များကိုမတွေ့ရပါ၊ သူတို့လည်းကျွန်ုပ်ကိုမတွေ့နိုင်ကြပါ။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ bb မှသင်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်၊ စကားဝှက်ကို စတင်၍ စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုပါ။ အထက်ပါအဝါရောင်အစင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဤသို့ပြောပါသည် - ပထမ ဦး စွာသင်ကျွန်ုပ်နားမလည်သောဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဝင်ရောက်ရမည်။
ငါ facebook ကုဒ်နှင့်အတူသူတို့ပြသနာများသူတို့မေးလ်အားဖြင့်ငါ့ကိုမပို့ချင်ကျေးဇူးပြုပြီး mandamelon grax ... ..
code နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကအစမှာငါအီးမေးလ်နဲ့စကားဝှက်ကိုထည့်လိုက်ပြီး code နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးငါလိုချင်တဲ့ code ကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ ဦး ။,
မင်္ဂလာပါခင်ဗျားဘယ်လိုလဲငါ Facebook ကို ၀ င်တာဖြစ်ပေမယ့်အိမ်မျက်နှာပြင်မှာဘာမှမပေါ်လာဘူး။ ဘာမှမ load လုပ်တာနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ မှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူး၊ ငါ့နံရံကိုသာတွေ့တယ်။ ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလောက်ပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ငါအဖြေရှာတွေ့ပြီလားဖြေရှင်းလိုက်ပြီ။ မင်းကိုမင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ Damian ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်နှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်သည်ဤ4ရက်ကဲ့သို့: S
ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေတစ်ခုပေးပါ ဦး ။ Graciiaz
ချက်တင်မှ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုကိုဖွင့်ထားသူကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါအဲဒီမှာမတက်ဘူး
ငါမျက်နှာစကားဝိုင်းမသုံးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။ သူက "ဒီအချိန်မှာ facebook chat နဲ့မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး" လို့ပြောတယ်
Leonardo Martinez cuevas ဟုသူကပြောသည်
ကျနော်တို့ faceebok နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ ဘယ်သူမှဘယ်သူ့ကိုမှမပြင်ဘူး၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်အရေးမယူတာလဲ၊ ပြproblemနာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုပြောပြပေးနိုင်မလား။
leonardo martinez cuevas အားစာပြန်ပါ
ဂလော်ဒီယာ andrea astudillo villegas ဟုသူကပြောသည်
ငါ facebook ဆက်သွယ်မှုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ နောက်တဖန်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိချင်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး, ငါတကယ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်, သူတို့ကသူတို့မကြာခဏမကြာခဏငါ့ထံသို့လာ။ ငါ့အလုပ်ပြတ်တောက်
claudia andrea astudillo villegas သို့ပြန်သွားပါ
Camilo Morales ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င ်၍ မရပါ၊ ၎င်းသည်ပင်မ ၀ င်းဒိုးကိုသာဖွင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းကိုထည့်သွင်းလိုပါက၎င်းသည်ဖွင့်နေပါမည်။
camilo morales အားပြန်ပြောပါ
patricio နှင့် carlos တို့ကထို aser ကိုသဘောမတူကြောင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိရင်မင်းတို့အဲဒါကိုအများကြီးမှတ်မိတယ်လို့ပြောပါ။
ဖာနန်ဒို MENCHAQUE CARBAJAL ဟုသူကပြောသည်
ဖာနန်ဒို MENCHAQUE CARBAJAL အားစာပြန်ပါ
မျက်နှာမျက်နှာပြင်ချက်ချင်းမသုံးနိူင်ပါ။ ဟဲလိုရေးသားပြီးကျွန်ုပ်ရိုက်ထည့်လိုက်သောစာကိုပို့ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းမပို့ပါကကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ခြင်းကိုကြည့်။ ကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်၊ မျက်နှာချင်းစကားပြောခြင်းနှင့်သာကြုံတွေ့ရသည်။ ! ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ။ :(
ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပြီး nmas qe pud ကိုသုံးပြီးကတည်းက
dspes n ကဟာသကိုပြောနိုင်တယ်။ @
ငါ asl facebook ကိုရောက်တဲ့အခါငါအီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်ကိုထား၏
ပြီးတော့ငါ code ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ကြောင်းရ
နောက်မှငါသူတို့ code ကိုပေးစေခြင်းငှါ၎င်း, ... ။
ငါနေ့တိုင်း ၀ င်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးထားသောလျှို့ဝှက်နံပါတ်အရေအတွက်»ရေတွက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်များကိုမှတ်မိပြီးစာတိုက်မှကုဒ်ကိုစောင့်နေရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြproblemနာနည်းနေသည့် အချိန်မှစ၍oooooooooooooooo ... ?????
တစ်နေ့မှာငါဖေ့စ်ဘုတ်မှာစကားဝှက်ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်အဲဒီကိုဝင်ချင်တိုင်း၊ စကားဝှက်ကငါ့ကိုလက်မခံဘူး။ "ငါလျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားတယ်" ကိုအမှတ်အသားပြုတယ်၊ သူတို့ကယာယီစကားဝှက်နဲ့အီးမေးလ်ပို့ကြတယ်။ ထို နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းပင်ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဝင်နိုင်ပါကထိုအရပ်မှထိုနေရာမှပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အမြဲတမ်းတူညီနေပြီးရိုးသားစွာငါပင်ပန်းနေပြီဖြစ်သည်။ Facebook ကကျွန်ုပ်၏အသင်းကိုမှတ်ပုံတင်ရန်တောင်းဆိုသည် ငါလုပ်တယ် ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအားလုံးအတွက်အဖြေရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားပါမည်။
ငါစုံစမ်းလိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည်နံနက်ခင်းတိုင်းချက်တင်စကားပြောဆက်သွယ်မှုတွင်ထင်ရှားပြီး FB သို့မဝင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုစကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့သောကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်သည်စကားပြောခန်းမှထွက်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းပြောပြသည်။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကိုမပိတ်ခင်ဆက်သွယ်မှုပြသနာတွေမဖြစ်မှီည။ FB ပြaနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ရဲ့ FB အကောင့်ထဲဝင်လို့ရပြီ။ PLS, သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်လျှင်
အလက်ဇန္ဒား ;? ဟုသူကပြောသည်
mmm ami ငါဓာတ်ပုံများကိုအယ်လ်ဘမ်သို့ထည့်ရန်ကြိုးစားသောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည့်အခါကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပိတ်ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါဖွင့်ရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့သိဖို့ကျွန်တော့်ကိုသူတို့အဖြေပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ့ကိုကူညီဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိပါသလား။ mei facebook chat ကိုကျွန်တော်မဖွင့်နိုင်ပါ
တစ်စုံတစ် ဦး ၌အဖြေတစ်ခုရှိသည့်ကျွန်ုပ်၏အတွင်းသတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်
Daniela gutierrez ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုအမှတ်အသားပြုပြီး၎င်းသည် ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။ အကယ်စင်စစ်တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုလွှဲပြောင်းယူခြင်း (သို့) ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုအယောင်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားစိုးရိမ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ !!!
Daniela Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
Mely Moran ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုမဝင်ရောက်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး၎င်းသည် log in မဝင်နိုင်ပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၎င်းသည် log in မလုပ်တော့ပါ။ နောက်တဖန်ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုတောင်းပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်ကိုမေးပါ၊ စာမျက်နှာကိုပိတ်ပါ
မနေ့ကမှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်နှစ်ကြာမှတ်တမ်းတင်ရန်အစီအစဉ်ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသောအချိန်ကျွန်ုပ်မှစကားပြောခြင်းကိုမဖွင့်နိုင်ပါကတစ်စုံတစ် ဦး မှအဖြေတစ်ခုတွေ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ
ခေါင်းစဉ်မျက်နှာပြင်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုစာတိုက်မှငါ့ကိုပေးပို့ကြောင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ပါကအခြားသူများ၏ profile များကိုငါမမြင်နိုင်ပါ
ဒါပေမယ့် Hot mail ကပို့ပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောနိုင်တဲ့အတွက် ... သူတို့အဆက်အသွယ်တွေဘယ်လောက်အထိထူးဆန်းနေတာလဲ။ သူတို့မှာအင်တာနက်ရှိနေလို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်တာပဲ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် ... စောင့်ရ ဦး မယ်။
ပြီးတော့ home screen ပေါ်မှာဘာမှမပေါ်လာ၊ နံရံပေါ်မှာဘာမှမပေါ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါရေးလို့မရဘူး၊
အနီ avalos solange ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ၊ ဘာမှမှတ်ချက်မပေးနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ မကြာမီအဖြေတစ်ခုပေးပို့ပါ
solange avalos rojas အားပြန်လည်ဖြေရှင်းပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ စာမျက်နှာသည်တင်လာပြီးအမှားအယွင်းများပြီးနောက်စာမျက်နှာများကဲ့သို့ဖြစ်သည် http://www.pagerage.com o http://www.yontoo.com..
ဒါကြောင့်သင်တစ်နေ့လုံးပစ်နိုင်ပြီး၊ ဒါကငါ့ကိုဘယ် site ကိုမှ ၀ င်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး၊ ပျက်သွားသည်အထိတဖြည်းဖြည်းနှေးကွေးလာတယ်။ တကယ်လို့ chat အကြောင်းပြောရင်ကောင်းမယ်။ အဲဒီစာမျက်နှာများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးရန်အတွက်ချက်တင်စကားပြောရန်။
ငါ cookies များကိုအများဆုံးနှင့်အခြားအရာတစ်ခုခုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဖြေရှင်းချက်မရှိ။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ ???? ငါ့ရဲ့ casillassssssss ထဲကငါ့ကိုယူ !!!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျေးဇူးပြုပြီး e-mail မှ ct !!!
ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိပါက ၀ င်းဒိုးသည်ချက်ချင်းပိတ်သွားပြီး၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်အနှောင့်အယှက်မရှိဖြစ်နိုင်လျှင်ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်အခြားဆိုဒ်များတွင်အကူအညီတောင်းပါ။
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သူငယ်ချင်းများသည်ချက်တင်တွင်ဆက်သွယ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ
ကက်သရင်း cuellar ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ချက်တင်ကိုဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်းများစွာဆက်သွယ်မှု ၅ ခုသာကျွန်ုပ်ပေါ်လာပြီး ၄၁၊ ၂၂၊ ၁၀ စသည်တို့ကိုမတွေ့မြင်မီ၊ ယခုတွင်အလွန်အတုအယောင်များမတွေ့ရပါ။ ၎င်းတို့သည်ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ pro ami pro ကိုဆက်သွယ်သောသူငယ်ချင်းများ chat သို့မဟုတ် ami facebook xq ahy သူငယ်ချင်းများကျွန်ုပ်ဆီသို့မလာပါ။ km km okis grax ကိုကူညီပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
katherin cuellar အားပြန်ပြောပါ
ရီကာဒို vargas ဟုသူကပြောသည်
ယခုရက်အနည်းငယ် မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ Facebook နံရံတွင်ဘာမျှမရေးနိုင်၊ ချက်တင်နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်မရေးနိုင်ပါ။ သို့သော်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်၏ pc မှသာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်အလွန်ကောင်းစွာရိုက်ထည့်သောအခြားကွန်ပျူတာမှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်တော့်ထက်နိမ့်တဲ့အရှိန်က ၁၂၈ ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်သွားလာရန်လုံလောက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ricardo vargas အားပြန်ပြောပါ
Ricardo vargas .. ငါ့မျက်နှာလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါ့ pc လိုပဲတခြားဟုတ်တယ် .. x fa me me …။
ငါကွန်ပျူတာကို format လုပ်ဖို့ပို့လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး facebook ကငါ့ pc ကိုအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါ့ကိုစကားပြောခွင့်မပြုဘူး။ ဒါကငါ့ကိုဓာတ်ပုံများနှင့်ဓာတ်ပုံများကြည့်ဖို့ထက်အခြားဘာမှလုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေထင်ပါတယ်
Francisco ကတစ် ဦး က Mota က F ဟုသူကပြောသည်
Francisco A Mota F ကိုစာပြန်ပါ
လီယို Corredor ဟုသူကပြောသည်
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါစကားပြောချင်တဲ့အချိန်မှာငါဒီ option ကိုမရတော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမတွေ့ရဘူး။ ဒါကငါ့ကိုသိပ်ပြီးမကောင်းစေဘူး။
Leo Corredor သို့ပြန်သွားပါ
alfredo reyes raga ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာအကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါတိုင်းအဆင်ပြေသော်လည်းကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ရာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမျှမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်ပြီးမည်သူပိုသိမ်းဆည်းသည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဒဏ္legာရီတစ်ခုရရှိသည်။ connect or Canselar ကောင်းပြီ။ ဒီအပတ်ရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာဓာတ်ပုံတချို့တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါဘာလုပ်လို့ရလဲ။
alfredo reyes raga အားပြန်ကြားပါ
uhh မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အမှားလုပ်နေကြောင်းသင်ဘယ်လောက်အထိသိသနည်း။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အခြားသူများ၏အမှားများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းသည်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုပြုလုပ်မည်လား။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖန်သားပြင်ကမှေးမှိန်လာပြီးငါဟာစက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအတည်ပြုဖို့သူတို့မေးတဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်မေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုကိုငါဖြည့်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမဝင်ရဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါ facebook စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဲလစ်ဇဘက် carrillo ဟုသူကပြောသည်
elizabeth carrillo အားပြန်ပြောပါ
silvia ruiz ဟုသူကပြောသည်
silvia ruiz သို့ပြန်သွားရန်
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ဝင်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါက၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးလွန်သွားသည်၊ cookies နှင့်ဘာမျှမဖျက်ပစ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်းအရာအားလုံးပျက်ယွင်းသွားသည်၊ ငါသိသည်ဟုတ်မှန်သည်ကိုကြည့်ရန်ငါစစ်ဆေးသည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးအမှားများနှင့်အတူတူပင်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းပေါ်လာသည်။ ဤပြproblemနာကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ယောက်ျား၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏သားနှင့်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသောလူတိုင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ငါလမ်းညွှန်သမျှအခြားစာမျက်နှာများတွင်စုံလင်သည်ဒါကြောင့်ငါအကြပ်အတည်း၌တည်ရှိ၏။ ဗင်နီဇွဲလားကနေကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။
maria peña plaza မှစာပြန်ပါ
ငါမျက်နှာမ ၀ င်ရ။ ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ငါထင်မြင်ချက်မှားယွင်းနေသည်နှင့် nooo ငါ ၀ င်နိုင်ပြီးမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ငါချက်တင်ဝင်ပေမယ့်ငါ့ကိုစာဖြင့်ရေးသားပေးပို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ! ဖြစ်လိမ့်မည်! ငါနဲ့တူတူဖြစ်ပျက်ကတည်းကရက်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့သည်
Jose mari သို့ပြန်သွားပါ
အားလုံးကိုမေးမြန်းမှုတစ်ခုပဲ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် chat မှာအဆက်ပြတ်သွားပြီလား။
အန်နာ M ဟုသူကပြောသည်
ငါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါ Facebook ကို ၀ င်ပြီးပုံမှန်အရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူကမှငါနဲ့မဆက်သွယ်ဘူး၊ ငါဒီလို ၂ ရက်လောက်ငါရူးခဲ့တာပဲ ... ငါတစ်ယောက်တည်းလုပ်နိုင်တာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုပြောရင်ငါကျေးဇူးတင်မှာပဲ။
Ana M ကိုစာပြန်ပါ
မနေ့ကငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေကအရမ်းနှေးနေတယ်၊ ​​ဒါကမင်းနဲ့အတူတူလား။ လေးစားပါတယ်
ဂျိန်း tzitita ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့သောရက်များအထိမျက်နှာစာအုပ်၏စကားဝိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သည်၊ ယခု၎င်းကိုကြိုးစားတိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီး၊ သူငယ်ချင်းများ၏ပြတင်းပေါက်ဖွင့်တော့မည်မဟုတ်
သူတို့ဟာသူတို့နဲ့စကားပြောဖို့ချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ ငါဆက်လုပ်နေပေမဲ့၊ ငါ (စကားပြောဆက်သွယ်မှုမရှိပဲ) ချက်တင်ရတယ်၊ ငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ညီလည်းကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြmeနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကူညီပေးပါ။
jane tzitita အားပြန်ကြားပါ
ငါဆက်သွယ်ချင်တယ်၊ စာမျက်နှာပေါ်လာပြီးမပို့ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ အရာအားလုံးထွက်လာပြီ။ အခုအဖြေတစ်ခုရချင်တယ်။ !!
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် facebook chat နှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာများရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်မဆက်သွယ်ပါ
လွန်ခဲ့သော2ရက်ကကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Facebook chat နှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။
ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်မတွေ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ NOO ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ထပ်တူဖြစ်ပျက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်အဆက်ပြတ်နေပုံရသည်။ ဤအရာသည်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်ဘာမှမရေးသားခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး၊
Sandra daniela poblete ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကဏ္ close ကိုပိတ်ရန်၊ မွမ်းမံရန်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အရေးတကြီးသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
sandra daniela poblete အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို…။! ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုစိတ်မကောင်းပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်၌ ၂ ရှိပြီး၎င်းတို့သည် ys q 'အရကျွန်ုပ်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ၊ အကြောင်းမှာ' စကားဝှက်သည်မကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ x ရေးပါ xq''w ရေးနေတယ် 'x more q' ဒီစာမျက်နှာကိုရေးပါ၊ ငါအဖြေတွေမရဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလိမ်လည်မှုလို့ပြောတာပဲ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ငါကိုမင်းကိုပြစ်မှားမိရင်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့်ငါလုပ်ရ ဦး မယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အကယ်၍ facebook xq 'ငါ့မှာ ၂ ရှိတယ်၊ ငါ့ကိုဒီနေရာမှာအလုပ်မလုပ်မချင်းငါ့ကို xfavor မဖွင့်ဘူးဆိုတော့' ငါဒီစာမျက်နှာကို xq 'ကိုရေးမယ်' ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာကပျက်စီးယိုယွင်းနေတယ်၊ ​​ငွေ x သိပ်မရှိဘူးလို့ငါပြောဖို့ငါရေးလိုက်တာပါ။
မရ x အချိန်။
အချိန်ကိုဘာမျှမဖြုန်းတီး '' ဒီမှာမျှတမဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ကတစ် ဦး ruiiiiiiinaaaaaaaa ဖြစ်ကြသည်။
ဆိုလိုတာကတော့ငါစာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။ ပိုပြီး fenoo
dario fica ဟုသူကပြောသည်
ငါပင်မစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်လို့မရပါဘူးဒါပေမယ့်ပရိုဖိုင်းကို၎င်းထက်ပို။ ဘာမျှမ, ငါ yaaaaaaaaa အဖြေတစ်ခုလို !!!!
dario fica အားပြန်ကြားပါ
carlita ပန်း ဟုသူကပြောသည်
ငါ့စာမျက်နှာကကွက်လပ်ဖြစ်နေတယ်။ ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ပျက်လဲဆိုတာငါသိတယ်။ ၀ က်သားကိုဗိုင်းရပ်စ်လို့မထင်ဘူး။ ဒါကငါလိုအပ်တဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပဲ
carlita flores အားပြန်ကြားပါ
ines bois ဟုသူကပြောသည်
ငါအတည်ပြုချက်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပေးပို့ခြင်းကြောင့်ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မှမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ချင်သောအခါငါ့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကဒီအတည်ပြုချက်ခြေလှမ်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုကြပြီ ထိုအခါငါချက်တင်မရရှိနိုင်ကြောင်းငါ့အပုံရသည် !! ငါဒါနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ။
ines bois အားပြန်ကြားပါ
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောချင်တယ်၊ စကားပြောချင်တယ်၊ ခလုပ်နှိပ်တယ်၊ မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး၊ ချိတ်ဆက်ထားသည့်သူငယ်ချင်းများကိုရှာသည်၊ နာမည်ပေးလိုက်သော်လည်းစကားမပြောနိုင်သေးဘူး။
ငါချက်တင်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ မကောင်းသောအရာကဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာသည်ဆက်နေမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုးဆုံးမှာကျွန်ုပ်ထံမှတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေသူတစ် ဦး ဦး နှင့်ချက်ချင်းစကားပြောရန်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် xfa ကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီချင်ပါသည် konyta_14_@hotmail.com
မင်္ဂလာပါ! ကျွန်ုပ်သည် chat ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်ဖွင့်သော်လည်းဆက်နွယ်နေသည့်စာရင်းမပေါ်လာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တင်နေသည်ဟုဆိုသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင် nunka ကို load မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်အနမ်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အစမှပရိုဖိုင်းသို့မသွားနိုင်ပါ။ ငါအသိပေးချက်များမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသော်လည်း ... မည်သူမဆိုငါဘာလုပ်ရမှန်းသိ?
ငါ့ပြBနာက Facebook မှာချိတ်ဆက်ထားတာ။ ဒါပေမယ့်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုမကြည့်ကြဘူး၊ ငါဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ ...
ဟယ်လိုတစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ရဲ့ Facebook ကိုကူညီနိုင်မလား ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်။ မရပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းကိုဖွင့်ပေးပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းကိုနှိပ်သောအခါကျွန်ုပ်ကိုဖွင့်ခွင့်မပြုပါ။ စာမျက်နှာသည်အလွတ်ဖြစ်နေပြီးကျွန်ုပ်ဖွင့်ချင်သောအခါမှားယွင်းမှုတစ်ခုလည်းရှိပါသည်။ စကားပြော ... အကူအညီပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဆိုပါ rocio ရဲတိုက်ကနေ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပင်မစာမျက်နှာကိုမဖွင့်နိုင်ပါ၊ စာမျက်နှာသည်ကွက်လပ်ဖြစ်နေပြီး၎င်းသည်အမှားတစ်ခုအနေဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ကိုရက်ပေါင်းများစွာဒီလိုကူညီပေးခဲ့တယ်
del castillo rocio အားပြန်ပြောပါ
ငါစာမျက်နှာ c ၌အမှားများနှင့်အတူစာမျက်နှာ c စာရင်းကိုကြည့်ရှုနေတုန်းပဲ။ နက်ဖြန်ဤကဲ့သို့သောပုံပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း nhormail ဖွင့်လှစ်သော်လည်းငါမှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ငါ၏အမြို့ရိုးပေါ်မှာရေးဖို့မအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမှားတြိဂံပုံရသည် hope
မင်္ဂလာပါ။ ငါအကြိမ်များစွာတူညီသောအရာငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, ဒါပေမယ့်အဲဒီအခြိနျမှာငါ Forward သို့မဟုတ် Back ခလုတ်ပေါ် browser ကို (mozilla သို့မဟုတ်စူးစမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ်ပါကသမျှ) ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်စကားလုံးပရိုဖိုင်းကိုချက်ချင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ငါနှိပ်လိုက်။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာပေါ်ရှိအမှားအယွင်းတစ်ခုနှင့်တူသော်လည်းသင်၏အိပ်စက်ခြင်းကိုလည်းမပျောက်စေပါ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာ၌ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ အရာရာတိုင်းသည်ယနေ့တိုင်အောင်ပုံမှန်လည်ပတ်နေပြီးယနေ့ထိပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်ဝင်ပါ။ သို့သော်အချို့သောသတိပေးချက်များကိုကြည့်လိုပါကမည်သည့်အရာမျှ load မလုပ်ပါ။ ဟုတ်ပါသည်။ ၎င်းကို load လုပ်ရန်ကြိုးစားပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ "ဒါပေမယ့်ဒီသတင်းဟာသတင်းတွေအားလုံးရှိနေတဲ့ငါ့နံရံပေါ်မှာစတင်သည့်စာမျက်နှာမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်၊ ဘာမှမတက်ဘူး၊ တကယ်တော့ငါ့နာမည်ကိုငါပေးတဲ့အချိန်မှာ၊ ငါ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖွင့်မထားဘူး။ ဒါကကော။ : S တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုသိရင်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းပြောပါ။
ငါ့မျက်နှာမ ၀ င်နိုင်။ Firefox မှတဆင့်စာမျက်နှာကိုဝင်သောအခါအလွတ်ဖြစ်နေသည်။ ငါ Internet explorer နှင့်ဝင်သောအခါ၎င်းသည်ပင်မစာမျက်နှာထဲသို့ ၀ င်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်သို့တိုးတက်ရန်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ .. ဘာဖြစ်တာလဲသိလား
မင်္ဂလာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါတယ်။ ငါ facebook chat ကိုသုံးပြီးတစ်လလောက်ကြာပါပြီ။ ဘယ်သူမှချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။ x my msn ကသူငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကသူတို့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်မလား။ ငါ့ကို ???
ပြင်သစ် USMA ဟုသူကပြောသည်
GENTLEMEN MORNING .. DAYW MY MY COMPUTER DOWNNE: ဆက်သွယ်မှုမှားယွင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်အားတရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမျက်နှာပြင်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။ အခြားစာမျက်နှာများမှာအဆင်ပြေပါသည်။ အထူးသဖြင့်ဒီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်တာကအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး ကိုလံဘီယာတွင်အချို့သောချို့ယွင်းချက်များရှိပါက
FRANCISCO USMA သို့စာပြန်ပါ
Ritsana Liranzo ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်စကားပြောနိုင်ရန်အတွက်အဆက်အသွယ်တစ်ခုမှတစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါချက်ချင်းစကားပြောခြင်းနှင့်ပြaနာရှိသည်။ ၅ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်၎င်းသည်အဆက်ပြတ်သွားပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ် update လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ နောက်တစ်မိနစ်တွင်၎င်းသည်အဆက်ပြတ်သွားသည်!
Ritsana Liranzo အားပြန်ပြောပါ
maribel arregui ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုရိုက်ထည့်တော့မည်မဟုတ်ပေမယ့်ချက်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဖွင့်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်ချင်ပါတယ်၊ ဖွင့်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ရွေးချယ်စရာများကိုမပြပါ …။
maribel arregui အားပြန်ပြောပါ
chat မရှိတဲ့သူတွေအတွက်အမှန်တကယ်အမှန်တကယ်ရှိနေချိန်မှာသူတို့မှာဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးလို့သူတို့ကိုပြောတာကြောင့်အဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားတာ။ ငါချက်တင်ပြေးသောဘားတွင်ခလုတ်တစ်မျိုးမျိုးရှိနေသည်ကိုငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါကသင်သူငယ်ချင်းများစာရင်းကိုပိတ်ထားလို့သတိပြုပါ။ ငါဟဟားဟားတွက်ချက်ဖို့အချိန်အများကြီးကုန်ခဲ့လို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ facebook စာမျက်နှာတွင်ရက်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိအမှားအယွင်းများပါသောအဝါရောင်အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုနံရံပေါ်တွင်ရေးရန်၊ မက်ဆေ့ခ်ျများဖွင့်ရန်၊ စကားပြောရန်စသည်ဖြင့်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ရက်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ် Facebook သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားအဆက်ပြတ်နေပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုဖြည့်သွင်းသောအခါတွင်၎င်းသည်အလွတ်ဖြစ်နေသည်နှင့်စာမျက်နှာအလွန်နှေးကွေးနေသဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ Facebook chat ကိုဖွင့်နိုင်ပြီးရက်အနည်းငယ်လောက်အကြာမှာပဲကျွန်မရဲ့အဆက်အသွယ်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာတွေ့နိုင်ပြီးသတိပေးချက်များကိုဖွင့်ဖို့အချိန်ယူပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်မပြုပါ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်လည်းပြproblemsနာများရှိပါသည်။ xfi ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာနည်းနည်းရှိပါသေးတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်ရင်ငါဖြေနိုင်မယ်၊ ကြည့်မယ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲကိုဝင်လို့မရဘူး၊ ဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ နံရံပေါ်မှာလည်းမဖြေနိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Leonardo bernal ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Facebook chat ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဆက်သွယ်မှုပြသနာများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
leonardo bernal အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်သည့်အခါမျက်နှာစကားပြောခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်ခုကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာအမှားတစ်ခုနှင့်သင်္ကေတပါသောအဝါရောင်တြိဂံတစ်ခုကို ရရှိ၍ မျက်နှာပိတ်သွားသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကယခုမှကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်၊
ငါ koneconnect ဖြစ်လျှင်ငါ disconnect ဖြစ်လျှင်ငါ komo ပေါ်လာသည်။
k က k unternet စူးစမ်းရှာဖွေသူမနိုင်ကပြောပါတယ်
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကိုကျွန်ုပ်အားကူညီစေချင်ပါသည်၊ ၎င်းသည် fb မှချက်တင်မဖွင့်ပါ၊ ချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်း (သို့) အပြစ်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပဲထွက်ခွာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
Gnfr? D 'Lamperti' ဟုသူကပြောသည်
Gnfr အားပြန်ကြားချက်? D 'Lamperti'
ငါ့မကျြနှာ၌ငါ့ကိုမကူညီဘူး chatting, ငါကပျင်းရိလည်းပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်စေ thatuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ပါ၊
နယ်လ်ဆင် carruega ဟုသူကပြောသည်
HELLO … CHE ဒီမျက်နှာကိုငါမသုံးနိုင်တဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ? ငါကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောဖို့သုံးတဲ့တစ်ခုတည်းသော NEDI …။ အခုဒီပြBနာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ။
nelson carruega အားပြန်ပြောပါ
Guillermo ကားလို့စ်ဒီဒီဂို ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုမဝင်ရောက်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားပြီး၊ ကျွန်ုပ် ၀ င် ရောက်၍ မရပါ၊ ၎င်းပြောင်းလဲသွားသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့စနစ်ကစနစ်တစ်ခုကကျွန်ုပ်ထံအီးမေးလ်သို့ပို့သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်လျှောက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို SMS "f" 325. * မှတဆင့်ထည့်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းမှစာသားစာကအမှားတစ်ခုရှိကြောင်းပြောပြသည်။ ငါထွက်လမ်းမရှိသောနှင့်အတူမှီဝဲတယ်။ ငါပလတ်စတစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအနုပညာပရိတ်သတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့အတွက်ငါ့အတွက်ဒီအလတ်စားဟာအရေးကြီးတယ်၊ အဖြေတစ်ခုအတွက်ငါစောင့်နေတယ်။ မင်းရဲ့အကူအညီကိုငါစောင့်နေတယ် guillermocarlosdidiego@yahoo.com.ar
guillermo carlos didiego သို့ပြန်သွားရန်
အကယ်၍ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းပြန်လာပြီးစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်တောင်းခံလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖယ်ထုတ်ပြီးကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာကို ၀ င ်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်၏စာများဖတ်ရန် (သို့) ကျွန်ုပ်ရရှိသောမှတ်ချက်များကိုဖြေရန်ခွင့်မပြုပါ။ ငါစာမျက်နှာကိုရိုက်ထည့်ရမယ်တဲ့သတိပေးချက်
ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာထဲသို့ ၀ င ်၍ မရပါ၊ အမြဲတမ်းပြန်လာပြီးစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းအကြောင်းကြားစာရသည့်မှတ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ငါစာမျက်နှာရိုက်ထည့်ရမယ်
Caroline Vione ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ! မျက်နှာကို ၀ င်ပြီး ၂ မိနစ်မပြည့်ခင်မှာအဆက်ဖြတ်လိုက်တယ်။ ပြproblemနာကဘာလဲ။ မင်းရဲ့အကောင့်လို့ငါထင်ပေမယ့်အဲဒါကို ၃ ကြိမ်မပြောင်းခဲ့ဘူး။ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး !!!!! အကူအညီ !!!! !!!
Carolina Vione ထံပြန်ပို့ပါ
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုစကားမပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပုပ်နေသောသူနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ။ meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pliiiiiiiiiiiiiissssssss ငါလိုအပ်သည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ကူညီပါ……… .. မျက်နှာကိုငါရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ facebook chat အဆက်အသွယ်တွေဟာတစ်ခုတောင်မှချိတ်ဆက်ပုံမရဘူး၊ ငါသူတို့ချိတ်ဆက်ပြီလို့ပြောရင်…။ ! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကူညီပေးသည်!
နှင့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး မှဖြစ်ပျက်
cristian alexander အားပြန်ပြောပါ
ငါစာမကျြနှာသို့မဝင်နိုင်ဘူးသော Facebook နှင့်အတူဖြစ်ပျက်
ငါ Facebook မပါဘဲငါသေကူညီဖို့လို !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် Facebook ကိုမှန်ကန်စွာ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်အဆက်အသွယ်အားလုံးတွင်ပြတ်တောက်သွားပုံနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဆက်အသွယ်များကိုမတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောပြtheနာမှာကျွန်ုပ်သည်ချက်တင်တွင်ရေးသည့်အခါ၎င်းသည်ဥပမာအားဖြင့်သာရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ !!!! … xD … .dhfshd sds kaiii da ………မည်သည့်ပြfailနာရှိသနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်သည့် Facebook chat တွင်ပြproblemsနာများရှိနေပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၀ င်သော်လည်းထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်အားစောင့်ဆိုင်းနေရပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘာလုပ်ရမလဲ can ပြောပြပါ။
javiiera ဘီဘာ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်မှာ Justin Bieber ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သိလျှင် Facebook နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမယ့် Justin Drew Bieber Mallette ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်ပါသည်။
javiiera bieber အားပြန်ကြားပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ကျွန်ုပ် facebbok နှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ pssa၊ အလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်။ မျက်နှာမျက်နှာဖုံးနဲ့ပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ချက်ချင်းပဲဖွင့်စရာမလိုပဲချက်တင်စကားပြောတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ chat က update လုပ်ထားတဲ့ browser တွေအတွက်သာအလုပ်လုပ်တယ်၊ download လုပ်တာတော်တော်များများ၊ ဘာမှမရှိဘူး။ လိုချင်တယ် ငါ့သူငယ်ချင်းများနှင့် minoovio နှင့်ဆက်သွယ်ရန် .. xxfaaaa တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
mm မင်းကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်၊ ​​ငါချက်တင်မပြောချင်ဘူး
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင် ၂ နာရီကျော်စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပြီး၎င်းကိုမပြုပြင်နိုင်ပါ
ငါနဲ့ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ချက်တင်မဖွင့်ဘူး သူတို့ကမြှားတွေနဲ့ရှိနေရင်သူတို့ကိုထုတ်ပစ်ပါ၊ အဲဒါကချက်တင်မဖွင့်ဖို့သေချာတဲ့အရာပဲ။ ငါကောင်းစွာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ် ...... ။ 😀
ဟေ့ကောင်တွေဘယ်လိုနေလဲ မင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြtoနာတွေကိုငါဖြေရှင်းနိုင်ပြီ florenciabelen88@hotmail.com အနမ်းထည့်ပါ
omar ပြန်လည် chirinos ortiz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏ chat ကိုကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏နံရံပေါ်တွင်သာရေးသားနိူင်ပါသည်။
omar re chirinos ortiz သို့ပြန်သွားရန်
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသလား။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖွင့်ချင်။ စကားဝှက်ကိုမထည့်လိုပါ
မင်္ဂလာပါ။ လူမှုရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုမဖြုန်းတီးနိုင်ပါ။ ချက်တင်စကားပြောခြင်းကိုပိတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုမချက်ပြုတ်ပါဟုကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီလိုပါတယ်
Ruben de la Cruz ဟုသူကပြောသည်
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်သွားလဲ။